dopamine ဘာကိုဆိုလိုသလဲ (2018) - Porn တွင်သင်၏ ဦး နှောက်
dopamine ဘာကိုဆိုလိုသလဲ (2018)
နတ် neuroscience။ စာရေးသူလက်ရေးမူများမှာတွေ့နိုင်ပါတယ်; PMC 2019 ဖေဖော်ဝါရီ 1 အတွက်ရရှိနိုင်ပါ။
နတ် neuroscience ။ 2018 ဇွန်; 21 (6): 787-793 ။
2018 မေလ 14 အွန်လိုင်းထုတ်ဝေသည်။ Doi: 10.1038 / s41593-018-0152-y က
Dopamine သင်ယူမှုနှင့်လှုံ့ဆျောမှုနှစ်ဦးစလုံး၏အရေးပါသော modulator တွေကိုဖြစ်ပါတယ်။ ဤသည်မှာပြဿနာတစ်ခုတင်ဆက်: ဘယ်လိုဆဲလ်တွေတိုးလာ dopamine သင်ယူဖို့, ဒါမှမဟုတ်ရွှေ့ဖို့ signal ကိုဟုတ်မဟုတ်ကိုသိပစ်မှတ်ထားနိုင်သလဲ ဒါဟာမကြာခဏ ( "phasic") အစာရှောင်ခြင်း dopamine အတက်အကျသင်ယူမှုများအတွက်ဆုလာဘ်ခန့်မှန်းအမှားများကိုဖော်ပြစဉ်လှုံ့ဆျောမှု, နှေးကွေးနေ ( "လုပ်သူများ") dopamine အပြောင်းအလဲများကပါဝင်ပတ်သက်သည်ဟုယူဆနေသည်။ သို့သျောလညျးမကြာသေးခင်ကလေ့လာမှုများ dopamine ပင်ခွဲဒုတိယ timescales ပေါ်စိတ်ခွန်အားနိုးတနျဖိုးသဘောဆောငျနှင့်လှုပ်ရှားမှုအားပေးအားမြှောက်ကြောင်းပြသခဲ့ကြသည်။ ဤတွင်ကျွန်မ dopamine ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသောအပြုအမူထိန်းညှိကိုဘယ်လိုတစ်ဦးကအခြားရွေးချယ်စရာအကောင့်ကိုဖော်ပြရန်။ လှုံ့ဆျောမှုနှင့်ဆက်စပ် Dopamine လွှတ်ပေးရန်လျှင်မြန်စွာနှင့်ဒေသအလိုက်လွတ်လပ်စွာ dopamine ဆဲလ်ပစ်ခတ်ရန်အနေဖြင့်, dopamine ဆိပ်ကမ်းအပေါ် receptors ခြင်းဖြင့်ထုဆစ်ထားသည်။ ပစ်မှတ်အာရုံခံရုတ်တရက် striatal cholinergic interneurons တဦးတည်းကိုယ်စားလှယ်လောင်း switch ကိုယန္တရားပေးအတူသင်ယူမှုနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်သည် Modes အကြားသို့ပြောင်းပါ။ dopamine များ၏အမူအကျင့်သက်ရောက်မှုမဟာမဲခေါင်ဒေသတွင်းအားဖြင့်ကွဲပြားပေမယ့်တစ်ဦးချင်းစီအမှု၌ dopamine ကြောင့်ထိုကဲ့သို့သောစွမ်းအင်, အာရုံစူးစိုက်မှု, ဒါမှမဟုတ်အချိန်အဖြစ်ကန့်သတ်ပြည်တွင်းရေးအရင်းအမြစ်, သုံးနရကျိုးနပ်သည်ဖြစ်စေတစ်ဦးပြောင်းလဲနေသောခန့်မှန်းချက်ပေးပါသည်။
dopamine လှုံ့ဆျောမှုအဘို့, သင်ယူခြင်းများအတွက် signal ကို Is, ဒါမှမဟုတ်နှစ်ဦးစလုံး?
dopamine ၏ကျွန်ုပ်တို့၏နားလည်မှုအတိတ်ထဲမှာပြောင်းလဲသွားပြီနှင့်တစ်ဖန်ပြောင်းလဲနေပါတယ်။ တစ်ခုမှာအရေးပါဂုဏ်ထူးအပေါ် dopamine သက်ရောက်မှုအကြားဖြစ်ပါသည် ယခု အပြုအမူ (စွမ်းဆောင်ရည်) နှင့်အပေါ် dopamine ဆိုးကျိုးများ အနာဂတ် အပြုအမူ (သင်ယူမှု) ။ နှစ်ဦးစလုံးအစစ်အမှန်များနှင့်အရေးကြီးလှသည်, ဒါပေမယ့်အမျိုးမျိုးသောအချိန်များတွင်တဦးတည်းမျက်နှာသာအတွက်ခဲ့ပြီနှင့်အခြားမဟုတ်ရှိပါတယ်။
(ထို '' 70s အတွက်) ကသိသာအပြုအမူအကျိုးဆက်လှုပ်ရှားမှုအတွင်းပြင်းထန်သောလျှော့ချရေးခဲ့, dopamine လမ်းကြောင်း၏ရွေးချယ်, ပြည့်စုံကိုတွေ့ရှိရပါသည်ဖျော်ဖြေဖို့ဖြစ်နိုင်သမျှဖြစ်လာခဲ့သည်လိုက်တဲ့အခါ1။ အဆင့်မြင့်ပါကင်ဆန်ရောဂါ, အဆိပ်အတောက်မူးယစ်ဆေးဝါးများ, ဒါမှမဟုတ် encephalitis ထုတ်လုပ်လူသားတွေအတွက် dopamine ဆုံးရှုံးမှုများ akinetic သက်ရောက်မှုနှင့်အတူဤသည်မထိုက်မတန်,2။ သို့သျောလညျးကြွက်မဟုတ်သလိုလူ့အမှုများကိုမရွှေ့ဖို့အခြေခံနိုင်စွမ်းမရှိခြင်းဖော်ပြရန်။ Dopamine-lesioned ကြွက်ရေအေးထဲမှာရေကူး3နှင့် akinetic လူနာတက်ရမယ့်မီးနှိုးဆော်သံအသံ ( "ဝိရောဓိ" kinesia) လျှင် run လိမ့်မည်။ မဟုတ်သလိုရှိဆုလာဘ်ကိုတန်ဖိုးထားအတွက်အခြေခံလိုငွေပြမှုသည်: dopamine-lesioned ကြွက်သူတို့၏ခံတွင်းထဲတွင်နေရာအစားအသောက်တို့ကိုလောင်ပါကခံစား၏အရိပ်လက္ခဏာကိုပြသပါလိမ့်မယ်4။ ယင်းအစားသူတို့တက်ကြွစွာဆုလာဘ်ရရှိရန်ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုကွိုးစားအားထုဖို့ရွေးချယ်မည်မဟုတ်။ ဤရွေ့ကားများနှင့်များစွာသောအခြားရလဒ်များကို dopamine နဲ့လှုံ့ဆော်မှုများအကြားအခြေခံ link ကိုထူထောင်5။ ပါကင်ဆန်ရောဂါ၏လျော့နည်း-ပြင်းထန်ကိစ္စများတွင်ကြည့်ရှုလေ့လာနှေးကွေးတောင်မှလှုပ်ရှားမှုကပိုမြန်လှုပ်ရှားမှုများကိုများအတွက်လိုအပ်သောစွမ်းအင်ကိုသုံးနတန်ဖိုးရှိမဟုတ်ကြောင်းသွယ်ဝိုက်ဆုံးဖြတ်ချက်များထင်ဟပ်တဲ့စိတ်ခွန်အားနိုးလိုငွေပြမှုထည့်သွင်းစဉ်းစားနိုင်ပါ6.
(ventral tegmental ဧရိယာ, VTA / substantia nigra compacta အ, SNc ဆန်းစစ်မှု midbrain ဒေသများကြောင်း forebrain မှစီမံကိန်းတွင်) ထို့နောက် (ထို '' 80s အတွက်) မျောက်ပြုမူအတွက် dopamine အာရုံခံ၏ရှေ့ဆောင်အသံသွင်းလာ၏။ လေ့လာပစ်ခတ်ရန်ပုံစံများများထဲတွင်ချက်ချင်းလှုပ်ရှားမှုတွေဖြစ်ပေါ်ကြောင်းလှုံ့ဆော်မှုမှလှုပ်ရှားမှုအကျဉ်းချုပ်ပြီးတော့ Activision နေတာခဲ့ကြသည်။ ဤ "phasic" dopamine ပစ်ခတ်ရန်အစပိုင်းတွင် "အမူအကျင့်ကို Activation" supporting အဖြစ်အဓိပ္ပာယ်ကောက်ယူခဲ့သည်7 နှင့် "စိတ်ခွန်အားနိုး arousal"8 - တစ်နည်းပြောရလျှင်တိရိစ္ဆာန်၏လက်ရှိအပြုအမူကိုအားဖြည့်ပေးသည်။
တစ်ဦးကအစွန်းရောက်ပြောင်းလဲမှု encoding ကအဖြစ် phasic dopamine ပြီးတော့ Activision နေတာများ၏အဓိပ္ပာယ်နှင့်တကွ, '' 90s အတွက်ဖြစ်ပွားခဲ့သည် ဆုလာဘ်ခန့်မှန်းအမှားများ (RPEs9) ။ ဒါက key ကိုလေ့လာရေးအပေါ်မှာအခြေခံခဲ့သည်: dopamine ဆဲလ်အနာဂတ်ဆုလာဘ်နဲ့ဆက်စပ်မမျှော်လင့်ဘဲလှုံ့ဆော်မှုတုံ့ပြန်ပေမယ့်ဒီလှုံ့ဆော်မှုမျှော်မှန်းဖြစ်လာလျှင်မကြာခဏတုံ့ပြန်ရပ်တန့်10။ အစောပိုင်းကသင်ယူမှုသီအိုရီ၌၎င်း, အထူးသဖြင့်အားဖြည့်သင်ယူမှု၏ထို့နောက်-ဖွံ့ဖြိုးဆဲကွန်ပျူတာသိပ္ပံလယ်ပြင်၌အစပြုအဆိုပါ RPE စိတ်ကူး11။ တစ်ဦး RPE signal ကို၏အချက် update လုပ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ် တန်ဖိုးများကို(အနာဂတ်ဆုလာဘ်၏ခန့်မှန်းချက်) ။ ဤရွေ့ကားတန်ဖိုးများကိုဆုလာဘ်တိုးမြှင့်ကြောင်းရွေးချယ်မှုအောင်ကူညီပေးဖို့, အကြာတွင်အသုံးပြုကြသည်။ dopamine ဆဲလ်ပစ်ခတ်ရန် RPEs တူများနှင့် RPEs သင်ယူမှုအတွက်အသုံးပြုနေကြသည်ကတည်းကကြောင့်သင်ယူမှုအတွက် dopamine ၏အခန်းကဏ္ဍကိုအလေးပေးဖို့သဘာဝအဖြစ်လာခဲ့သည်။ နောက်ပိုင်းတွင် optogenetic ထိန်းသိမ်းရေး RPE-coding ဆဲလ်များ၏ dopaminergic ဝိသေသလက္ခဏာကိုအတည်ပြု12,13 နှင့်ပြသ၎င်းတို့သည်အမှန်ပင်သင်ယူမှု modulate14,15.
dopamine တစ်ဦးသင်ယူမှု signal ကိုထောက်ပံ့ပေးကြောင်းအဆိုပါစိတ်ကူး, dopamine အဆိုပါ striatum အတွက် Synaptic plasticity modulates သောစာပေနှင့်အတူလှလှပပ dopamine ၏မူလတန်း forebrain ပစ်မှတ်ကိုက်ညီ။ ဥပမာ, တစ်ဦး striatal dendrite ကျောရိုး၏အချိုမှုဆွ၏သုံးဆတိုက်ဆိုင်မှု, postsynaptic depolarization နှင့် dopamine လွှတ်ပေးရန်ကျောရိုးကြီးထွားဖို့ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်16။ ရေရှည်သင်ယူမှုယန္တရားများ၏ Dopaminergic မော်ဂျူ striatal dopamine လွှတ်ပေးရန်တိုးမြှင့်များ၏ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုမျှဝေပေးသောစွဲလမ်းမူးယစ်ဆေးဝါးများ၏မြဲအပြုအမူအပေါ်သက်ရောက်မှုများရှင်းပြကူညီပေးသည်17။ dopamine ဆုံးရှုံးမှုနှင့်အတူပင်လေးနက် akinesia တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းထိုကဲ့သို့သောသင်ယူမှုယန္တရားများအားဖြင့်အဘို့မှတ်ရနိုင်18။ dopamine မရှိခြင်းသုညဆီသို့ဦးတည်အရေးယူဆောင်ရွက်ချက်များကိုတဖြည်းဖြည်း updates များကိုတန်ဖိုးများကိုအကြောင်း, တစ်ဦးအဆက်မပြတ်-အနုတ်လက္ခဏာ RPE အဖြစ်ကုသနိုင်ပါသည်။ အပြုအမူအပေါ်အလားတူတိုးတက်သော, မျိုးသုဉ်းကဲ့သို့သောဆိုးကျိုးများ dopamine ရန်ထုတ်လုပ်နိုင်ပါတယ်19,20.
dopamine သည်ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသောလှုံ့ဆော်မှုတွင်အဓိကပါ ၀ င်ပတ်သက်သည်ဟူသောအယူအဆသည်ဘယ်သောအခါမျှပျောက်ကွယ်သွားခြင်းမရှိပါ။ လှုံ့ဆော်မှု / လှုပ်ရှားမှု / အားတက်ကြွစေသော dopamine လုပ်ဆောင်ချက်များကိုလေ့လာခြင်းနှင့်ခွဲထုတ်။ မရကြောင်းခိုင်လုံသောအထောက်အထားများအရဤသည်သင့်လျော်ပါသည်15,20-23။ ဒီထက်ကျယ်ပြန့်-တန်ဖိုးထား DA တစ်ခု RPE သင်ယူမှု signal ကိုထောက်ပံ့ပေးကြောင်းသီအိုရီနှင့်အတူဤစိတ်ခွန်အားနိုးအခန်းကဏ္ဍပွနျလညျသငျ့မွတွင်ပါဝင်ပတ်သက်သည့်စိန်ခေါ်မှုတစ်ရပ်ဖြစ်ပါတယ်။
လှုံ့ဆျောမှု "မျှော်လင့်": သူကသင့်လျော်စွာလက်ရှိအပြုအမူဝါဒီများကိုစွမ်းအားမှအနာဂတ်ဆုလာဘ် (တန်ဖိုးများ) ၏ခန့်မှန်းချက်ကိုအသုံးပြုသည်။ ဆန့်ကျင်ဘက်အားဖြင့်, သင်ယူခြင်းမကြာသေးမီကအတိတ်အတွက်ပြည်နယ်နှင့်လုပ်ရပ်များမှာ "နောက်ပြန်ကြည့်", သူတို့ရဲ့တန်ဖိုးတွေကို update ။ သူတို့အားပြည်နယ်များ re-ကြုံတွေ့နေကြသည်လျှင် updated တန်ဖိုးများနောက်ဆက်တွဲဆုံးဖြတ်ချက်ချရာတွင်အသုံးပြုစေခြင်းငှါ, ထို့နောက်ဒါဘွားနောက်တဖန် updated နှင့်ဤတစ်သံသရာ၏ဖြည့်စွတ်အဆင့်ဖြစ်ကြသည်။ ဆုံးဖြတ်ချက်များ (performance ကို) အောင်တန်ဖိုးများကိုသုံးပြီး, ဒါမှမဟုတ်တန်ဖိုးများကို update (သင်ယူမှု) - သို့သော်သံသရာ၏အရာအဆင့်နှင့်အတူပါဝင်ပတ်သက် dopamine ပါသလဲ
အချို့သောအခြေအနေများတွင်ကတစ်ပြိုင်နက်နှစ်ဦးစလုံးအခန်းကဏ္ဍကစား dopamine စိတ်ကူးဖို့ရိုးရှင်းတဲ့ဖြစ်ပါတယ်။24မမျှော်လင့်ဘဲ, ဆုလာဘ်-ကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်တွေကို (အပြုအမူ invigorate နှင့်သင်ယူခြင်းကျလာသောနှစ်ဦးစလုံးပုံမှန်အားဖြင့်အဆိုပါ dopamine ဆဲလ်ပစ်ခတ်ရန် evoking နှင့်ဖြန့်ချိမှုအတွက့်ပညတ်ဖြစ်ရပ်များနှင့်ထိုကဲ့သို့သောတွေကိုများမှာသဖန်းသီး။ 1) ။ ဤအထူးသဖြင့်အခြေအနေတွင်ဆုလာဘ်ခန့်မှန်းခြင်းနှင့်ခန့်မှန်းခြင်းဆိုင်ရာအမှားများကတစ်ပြိုင်နက်တည်းတိုးများလာသည် - သို့သော်၎င်းသည်အမြဲတမ်းတော့မဟုတ်ချေ။ ဥပမာတစ်ခုအနေနှင့်လူနှင့်အခြားတိရိစ္ဆာန်များသည်အံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်သို့မဟုတ်အံ့သြဖွယ်ရာမရှိသည့်တိုင်ဆုများအတွက်လုပ်ကိုင်ရန်လှုံ့ဆော်ခံရလေ့ရှိသည်။ ဆုလာဘ်များပိုမိုနီးကပ်လာသည်နှင့်အမျှ၎င်းတို့သည် ပိုမို၍ ခက်ခဲသောအလုပ်များဖြစ်နိုင်သည် (ဆုလာဘ်များနီးကပ်လာသည်နှင့်အမျှတန်ဖိုးတိုးလာသည်) ။ အဓိကအချက်မှာသင်ယူခြင်းနှင့်လှုံ့ဆျောမှုသည်သဘောတရားအရ၊ ကွန်ပျူတာနှင့်အမူအကျင့်ကွဲပြားမှုဖြစ်သည် - သို့သော် dopamine သည်နှစ်မျိုးလုံးလုပ်ဟန်ရှိသည်။
သဖန်းသီး။ 1 ။
Dopamine: ပစ္စုပ္ပန် invigorating, အတိတ်ကို update ။
ထိပ်တန်း, မြှားနှင့်အတူ Circles ပြည်နယ်များနှင့်ထိုပြည်နယ်များအနေဖြင့်အလားအလာရှိသောလုပ်ရပ်များကိုကိုယ်စားပြုသည်။ မြှား width တစ်ဦးချင်းစီအရေးယူဖျော်ဖြေ၏လေ့လာသင်ယူတန်ဖိုးများကိုညွှန်ပြ။ ပြည်နယ်များ / လုပ်ရပ်များအတိတ်သို့လည်းညှိုးနွမ်းသကဲ့သို့, သူတို့တဖြည်းဖြည်းအားဖြည့်ဘို့လျော့နည်းရထိုက်ခွင့်ရှိပါတယ်။ အလယ်တန်း, dopamine တစ်ပေါကျကှဲတွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။ အဆိုပါရလဒ်သည်လက်ရှိပြည်နယ် (အနီရောင်) မှမရရှိနိုင်အရေးယူဆောင်ရွက်ချက်များကိုခှနျအားနှင့်မကြာသေးမီကဖျော်ဖြေလုပ်ရပ်များ (ခရမ်းရောင်) အတွက်တန်ဖိုးကိုယ်စားပြု၏ plasticity ဖြစ်ပါတယ်။ အောကျခွေပလတ်စတစ်၏ရလဒ်အဖြစ်လာမယ့်အချိန်ကဤပြည်နယ်များသူတို့ရဲ့ဆက်စပ်တန်ဖိုးများ (မြှား width) တိုးလာကြပါပြီကြုံတွေ့နေကြသည်။ မှတဆင့်အကြိမ်ကြိမ်အတှေ့အကွုံအားဖြည့်သင်ယူမှု ပို. ပို. ပို. သေချာသောဘယ်နေရာတွေမှာလဲအောင်, ပြည်နယ်အာကာသမှတဆင့် "ဟု groove ထွင်း" နိုငျသညျ။ ဒီသင်ယူမှုအခန်းကဏ္ဍအပြင်, dopamine ၏ခှနျအား, စွမ်းဆောင်ရည်အခန်းကဏ္ဍယခင်က-သင်ယူဘယ်နေရာတွေမှာလဲလျှောက်စီးဆင်းမှုအရှိန်မြှင့်ရန်ပုံရသည်။
အောက်တွင်ငါပြင်းထန်စွာ dopamine သင်ယူမှုနှင့်စိတ်ခွန်အားနိုးလုပ်ဆောင်ချက်များကိုနှစ်ဦးစလုံးအောင်မြင်ရန်နိုင်ဘယ်လိုလက်ရှိစိတ်ကူးများအကဲဖြတ်ရန်။ 1 ဆိပ်ကမ်းထံမှ) dopamine လွှတ်ပေးရန် dopamine ဆဲလ်ပစ်ခတ်ရန်အနေဖြင့်ရိုးရှင်းစွာပေါ်ထွန်းပါဘူး, ဒါပေမယ့်လည်းဒေသအလိုက်ထိန်းချုပ်ထားနိုင်ပါတယ်;: ငါသုံး key ကိုအချက်အလက်များအပေါ်အခြေခံပြီးတစ်ဦး updated မော်ဒယ်အဆိုပြု 2) dopamine အသီးသီးသင်ယူမှုနှင့်စွမ်းဆောင်မှုများအတွက်ကွဲပြားအကျိုးဆက်များနှင့်အတူပစ်မှတ်ဆဲလ် Synaptic plasticity နှင့်စိတ်လှုပ်ရှားနှစ်ဦးစလုံးအပေါ်သက်ရောက်မှု; plasticity အပေါ် 3) dopamine သက်ရောက်မှုအနီးအနားမှာ circuit ကိုဒြပ်စင်ခြင်းဖြင့်ပေါ်တွင်သို့မဟုတ်ပိတ်ထားနိုင်ပါတယ်။ အတူတူအဲဒီအင်္ဂါရပ်တွေကဦးနှောက်ဆားကစ်အသီးသီးသင်ယူမှုနှင့်လှုံ့ဆော်မှုများအတွက်နှစ်ခုကွဲပြား dopamine မက်ဆေ့ခ်ျအကြား toggle ခွင့်ပြုလိမ့်မည်။
ကွဲပြားခြားနားသောအဓိပ္ပါယ်များနှင့်အတူ "phasic" နှင့် "လုပ်သူများ" dopamine အချက်ပြမှုများအဲဒီမှာခွဲခြားရှိပါသလား
ဒါဟာသင်ယူမှုနှင့် dopamine ၏စိတ်ခွန်အားနိုးအခန်းကဏ္ဍကွဲပြားခြားနားသောအချိန်အကြေးခွံပေါ်ဖြစ်ပေါ်ကြောင်းမကြာခဏစောဒကတက်တာဖြစ်ပါတယ်25။ Dopamine ဆဲလ်ရံဖန်ရံခါအကျဉ်း ( "phasic") Activision နေတာသို့မဟုတ်ခေတ္တအတူတစ်စက္ကန့်အနည်းငယ် spikes မှာ ( "လုပ်သူများ") စဉ်ဆက်မပြတ်ပစ်ခတ်။ forebrain dopamine အတွက်လျင်မြန်စွာတိုးသက်ဆိုင်ရာ burst, သူတွေဟာ dopamine ဆဲလ်တွေဖြတ်ပြီးညှိအထူးသဖြင့်လျှင်, drive ကို26 အလွန်အမင်းယာယီ (Sub-ဒုတိယကြာချိန်ဖြစ်ကြောင်း27) ။ dopamine ပြင်းအား forebrain မှပစ်ခတ်လုပ်သူများ dopamine ဆဲလ်များ၏သီးခြားအလှူငွေလျော့နည်းရှင်းပါတယ်။ အချို့ကသက်သေအထောက်အထားဒီအလှူငွေကအရမ်းသေးငယ်သည်အကြံပြု28။ ဒါဟာစနစ် dopamine ဆဲလ်ပစ်ခတ်ရန်အတွက်အကျဉ်းဖြင့်ခေတ္တသတိထားမိဖို့ခွင့်ပြု, higher-ဆှဖှေဲ့ D2 receptors ၏အနီး-စဉ်ဆက်မပြတ်ဆွထုတ်လုပ်ရန်လုံလောက်သောဖြစ်နိုင်သည်29 နှင့်အနုတ်လက္ခဏာခန့်မှန်းအမှားများအတိုင်းဤဖြင့်ခေတ္တကိုအသုံးပြုပါ။
Microdialysis ကျယ်ပြန့် (ပုံမှန်အားဖြင့်အများကြီးမိနစ်ဖြတ်ပြီးပျမ်းမျှ) အနိမ့်ယာယီ resolution နဲ့ဆိုသော်ငြားတိုက်ရိုက် forebrain dopamine အဆင့်ဆင့်တိုင်းတာဖို့အသုံးပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ dopamine ၏ထိုကဲ့သို့သောနှေးကွေးတိုင်းတာအပြုအမူမှအတိအကျပြန်ပြောပြဖို့စိန်ခေါ်နိုင်ပါတယ်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေယင်းနျူကလိယ accumbens အတွက် dopamine ၏ microdialysis (NAc; medial / ventral striatum) locomotor လှုပ်ရှားမှုမှအပြုသဘောဆက်စပ်မှုကိုပြသ30 လှုံ့ဆျောမှုနှင့်အခြားအညွှန်းကိန်း5။ ဤသည်ကျယ်ပြန့် dopamine အာရုံစူးစိုက်မှုအတွက်နှေးကွေးနေ ( "လုပ်သူများ") အပြောင်းအလဲများကိုရှိပါတယ်ဆိုလိုခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ပြီး, ဤနှေးကွေးပြောင်းလဲမှုများကိုတစ်ဦးစိတ်ခွန်အားနိုး signal ကိုဖျောပွသညျ။ ပိုများသောအထူးသ, ကွန်ပျူတာမော်ဒယ်များလုပ်သူများ dopamine အဆင့်ဆင့်ရေရှည်ပျမ်းမျှအားဆုလာဘ်နှုန်းကိုခြေရာခံကြောင်းအဆိုပြုထားကြပါပြီ31 - အချိန်ခွဲဝေခြင်းနှင့်ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းအတွက်အသုံးဝင်သောလှုံ့ဆော်မှုတစ်ခု။ အလေးထားသင့်သည်မှာစာတမ်းအနည်းငယ်က“ tonic” dopamine အဆင့်ဆင့်ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းအဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုထားသည်။ ၎င်းတို့သည် dopamine အာရုံစူးစိုက်မှုသည် microdialysis ၏မိနစ်များစွာအချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခုအတွင်းဖြည်းဖြည်းချင်းပြောင်းလဲသွားသည်ဟုသာယူဆလေ့ရှိသည်။
သို့သျောလညျးဒီ "phasic dopamine = RPE / သင်ယူမှု, လုပ်သူများ dopamine = လှုံ့ဆျောမှု" အမြင်ပွဿနာမြားစှာရင်ဆိုင်နေရသည်။ ပထမဦးစွာလုပ်သူများ dopamine ဆဲလ်ပစ်ခတ်ရန်ပုံမှန်အားနှေးကွေးအချိန်အကြေးခွံကျော်ကွဲပြားခြားနားသည်မရှိတိုက်ရိုက်သက်သေအထောက်အထားရှိပါတယ်။ လုပ်သူများပစ်ခတ်ရန်နှုန်းထားများပြောင်းလဲနေတဲ့လှုံ့ဆျောမှုနှင့်အတူမပြောင်းပါဘူး32,33။ ဒါဟာလုပ်သူများ dopamine အဆင့်ဆင့်တက်ကြွ dopamine ဆဲလ်တစ်ပြောင်းလဲနေတဲ့အချိုးအစားကြောင့်ပြောင်းလဲသွားကြောင်းစောဒကတက်ထားသည်34,35။ သို့သော် undrugged, unlesioned တိရိစ္ဆာန်များအများအပြားလေ့လာမှုများကိုဖြတ်ပြီး, dopamine ဆဲလ်တွေအသံတိတ်နှင့်တက်ကြွသောပြည်နယ်များအကြားပြောင်းအစီရင်ခံထားဖူးဘူး။
ထို့အပွငျ microdialysis အစီအမံ dopamine အဆင့်ဆင့်တဖြည်းဖြည်း dopamine အဆင့်ဆင့်အမှန်တကယ်တဖြည်းဖြည်းပြောင်းလဲသွားမဆိုလိုပါဆိုတဲ့အချက်ကို။ ကျနော်တို့မကြာသေးမီက15 microdialysis နှင့်အစာရှောင်ခြင်း-scan ကသိသိ voltammetry နှစ်ဦးစလုံးသုံးပြီးတစ်ဦးဖြစ်နိုင်ဖွယ်အလားအလာဆုလာဘ် task ထဲမှာကြွက် NAc dopamine ဆန်းစစ်ခဲ့သည်။ ကျနော်တို့က mesolimbic dopamine အတည်ပြုခဲ့သည်, microdialysis ဖြင့်တိုင်းတာသည်အတိုင်း, ဆုလာဘ်နှုန်း (ဆုလာဘ် / မိနစ်) နဲ့ဆက်နွယ်နေပါသည်။ သို့သျောလညျးကိုတောင်တစ်တိုးတက်လာသော microdialysis ယာယီ resolution ကို (1min) နဲ့ dopamine အဖြစ်အစာရှောင်ကျနော်တို့ကနမူနာအဖြစ်မြန်: ငါတို့သည်အနေနဲ့မူလကပင်-နှေးကွေး dopamine signal ကိုအဘို့အဘယ်သူမျှမသက်သေအထောက်အထားများကိုမြင်တော်မူ၏။
voltammetry ၏နေဆဲအသေးစိတ်ယာယီ resolution ကိုအသုံးပြုခြင်းကျနော်တို့ခွဲဒုတိယ dopamine အတက်အကျနှင့်လှုံ့ဆော်မှုများအကြားရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးရှုလေ့လာကြသည်။ ကြွက်ဆုလာဘ်အောင်မြင်ရန်လိုအပ်လုပ်ရပ်များ၏ sequence ကိုဖျော်ဖြေအဖြစ်, dopamine သူတို့အကျိုးကိုရရှိခဲ့ရုံအဖြစ်အထွတ်အထိပ်သို့ရောက်ရှိ (နှင့်သူတို့ကစားသုံးအဖြစ်လျှင်မြန်စွာကျဆင်းနေ), ပိုမိုမြင့်မားခြင်းနှင့်ပိုမိုမြင့်မားလာခဲ့သည်။ ကျနော်တို့ကိုချက်ချင်းဆိုသလိုပြည်နယ်တန်ဖိုးပြင်းပြင်းထန်ထန်ဆက်နွယ်နေကြောင်း dopamine ကလက်ခံရရှိရန်လိုအပ်သည့်မျှော်မှန်းထားသည်အချိန်အားဖြင့်လျှော့မျှော်မှန်းအနာဂတ်ဆုလာဘ်အဖြစ် -defined ကြောင်းပြသခဲ့သည်။ ဤရွေ့ကားလျင်မြန်စွာ dopamine ဒိုင်းနမစ်လည်းကွဲပြားခြားနားသောအချိန်အကြေးခွံပေါ်သီးခြား dopamine အချက်ပြမှုများကိုသွန်းလောင်းပေးခြင်းမရှိဘဲ, အ microdialysis ရလဒ်များကိုရှင်းပြနိုင်ပါတယ်။ တိရိစ္ဆာန်များကပိုဆုလာဘ်ကိုခံစားရသကဲ့သို့, သူတို့ကရုံးတင်စစ်ဆေး sequence ကိုအသီးအသီးခြေလှမ်းမှာအနာဂတ်ဆုလာဘ်သူတို့ရဲ့မျှော်မှန်းချက်ကိုတိုးမြှင့်။ အဲဒီအစားတစ်ဖြည်းဖြည်းချင်း-ဖြစ်ပေါ်နေသောပျမ်းမျှအားဆုလာဘ်နှုန်းကို signal ကိုထက်, ဤလျှင်မြန်စွာ-ဖြစ်ပေါ်နေသောပြည်နယ်တန်ဖိုးများများအချိန်ကြာမြင့်စွာ microdialysis နမူနာစုဆောင်းခြင်းအချိန်ကျော်နှုန်းကိုအကောင်းဆုံးပျမ်းမျှအဖြစ်ရှင်းပြ dopamine နဲ့ဆုလာဘ်များအကြားဆက်စပ်မှု, ။
mesolimbic dopamine လွှတ်ပေးရန်၏ဤတန်ဖိုးကိုအနက်ကိုအကြိမ်ကြိမ်တိုးမြှင့်နီးကပ်အတူတက် dopamine လွှတ်ပေးရန်ရိုးဆုချမှတွေ့ရှိခဲ့ကြသူကတခြားသုတေသနအုပ်စုများထံမှ voltammetry ရလဒ်နှင့်အတူတသမတ်တည်းဖြစ်တယ်36-38(သဖန်းသီး။ 2) ။ ဤသည်စိတ်ခွန်အားနိုး signal ကိုမူလကပင် "နှေးကွေး" သည်မဟုတ်, အစားအချိန်အကြေးခွံတစ်ခုစဉ်ဆက်မပြတ်အကွာအဝေးကိုဖြတ်ပြီးလေ့လာတွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။ တစ်ခုချဉ်းကပ်အပြုအမူကိုလည်းအများအပြားစက္ကန့်ကြာလာသောအခါ dopamine ရိုးအများအပြားစက္ကန့်ကြာရှည်နိုငျသျောလညျး38, ဒီမဟုတ်ဘဲအခ်ါ dopamine ဒိုင်းနမစ်ထက်, အပြုအမူ၏အချိန်သင်တန်းထင်ဟပ်။ mesolimbic dopamine လွှတ်ပေးရန်နှင့်ပွောငျးလဲနေသောတန်ဖိုးကိုအကြားဆက်ဆံရေးစူးရှ voltammetry လျှပ်အတူ ~ 100ms timescale အပေါ် ie, မှတ်တမ်းတင် technique ကိုပါမစ်အဖြစ်အစာရှောင်ခြင်းအဖြစ်မြင်နိုင်သည်15.
သဖန်းသီး။2။
အစာရှောင်ခြင်း dopamine အတက်အကျသည် dynamically-ဖြစ်ပေါ်နေသောဆုလာဘ်မျှော်လင့်ချက်များအချက်ပြ။
ac ကြွက်မျှော်လင့်ဆုလာဘ်ပိုမိုနီးကပ်စွာ get ကဲ့သို့) Mesolimbic dopamine လွှတ်ပေးရန်လျှင်မြန်စွာတိုးပွားစေပါသည်။ ဆုလာဘ်ပိုမိုနီးကပ်စွာရရှိသွားတဲ့အဖြစ်ဃ) အနာဂတ်ဆုလာဘ်အဖြစ်ယာယီ-လျှော့ခန့်မှန်းသတ်မှတ်တန်ဖိုး, တိုးပွားစေပါသည်။ ကြောင်းဆုလာဘ်ကိုညွှန်းတွေကိုပိုမိုကြီးမားသည်ပိုမိုနီးကပ်စွာ, သို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုသေချာသောယခင်ကမျှော်မှန်းထားသည်ထက်အကြောင်းမရှိတန်ဖိုးခုန်။ တဦးတည်းအခိုက်ကနေလာမယ့်ဤခုန်ယာယီ-ခြားနားချက် RPEs ဖြစ်ကြသည်။ အီး) "baseline" ဝေးနုတ်တန်ဖိုးနှင့် RPE အချက်ပြမှုများကိုရှက်ကြောက်နိုင်ပါတယ်။ လက်ဝဲ, ဆုချ-ကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်ကို (အချိန်သုညမှာ) cue aligned dopamine, သမားရိုးကျအခြေခံအနုတ်အတူဆုလာဘ် (အညိုရောင်) လျော့နည်းမျှော်မှန်းဖြစ်ပါတယ်အခါ dopamine တစ်ခု RPE signal ကိုပုံနဲ့တူတဲ့, အဆင့်မြင့်ဖို့ခုန်ပြသပုံရသည်။ dopamine အဆင့်ဆင့် equating တူညီတဲ့အချက်အလက်များ၏ညာဘက်တစ်ဦးကအခြားရွေးချယ်စရာတင်ဆက်မှု, ပြီးနောက် အဆိုပါ cue, precue dopamine အဆင့်ဆင့်ဆုလာဘ်မျှော်လင့် (တန်ဖိုး) အပေါ်မူတည်ကြောင်းအစားကိုပြသလိမ့်မယ်။ အပိုဆောင်းဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းညာခြမ်းတင်ဆက်မှု (ref အတွက်အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုကြည့်ရှုအမှန်တရားနီးကပ်လာကြောင်းဆုံးဖြတ်သည်။ 15) ။ တစ်ဦး ref ထံမှခွင့်ပြုချက်နှင့်အတူ Panel ကိုပြန်ထုတ်ပေး 38, အေထုတ်ဝေလီမိတက် ... .; panel ကိုခ ref ထံမှခွင့်ပြုချက်နှင့်အတူပြန်ထုတ်ပေး။ 37, Elsevier; ပြား ce ref ထံမှခွင့်ပြုချက်နှင့်အတူပြန်ထုတ်ပေး 15, အေထုတ်ဝေလီမိတက်
အစာရှောင်ခြင်း dopamine အတက်အကျရိုးရှင်းစွာလှုံ့ဆျောမှု mirror ကြဘူး, သူတို့ကလည်းချက်ချင်းလှုံ့ဆော်အပြုအမူကိုမောင်း။ တွေကိုဖြစ်ပေါ်အောင် dopamine ဆဲလ်ပိုကြီး phasic တုံ့ပြန်မှုအလွန်တူညီရုံးတင်စစ်ဆေးအပေါ်ပိုမိုတိုတောင်းတုံ့ပြန်မှုကြိမ်ခန့်မှန်း39။ VTA dopamine ဆဲလ် Optogenetic ဆွကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖြစ်နိုင်ဖွယ်အလားအလာဆုလာဘ်တာဝန်အတွက်အလုပ်စတင်ကြွက်များပိုမိုစေသည်15သူတို့ဆုလာဘ်တစ်ခုမြင့်မားတဲ့မျှော်လင့်ခဲ့ရုံလျှင်အဖြစ်။ SNc dopamine အာရုံခံ, ဒါမှမဟုတ် dorsal striatum ၎င်းတို့၏ axon ၏ Optogenetic ဆွ, လှုပ်ရှားမှုများ၏ဖြစ်နိုင်ခြေကိုတိုးပွားစေ40,41။ ပြင်းထန်စွာဤအပြုအမူသက်ရောက်မှု optogenetic ဆွစတင်ခြင်း၏စုံတွဲတစ်တွဲတရာမီလီစက္ကန်အတွင်းသရုပ်ဖြစ်ကြသည်။ လှုံ့ဆျောမှုမြှင့်တင်ရန်ဆုလာဘ်-ကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်တွေကိုနိုင်စွမ်း NAc spiny အာရုံခံ၏စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်အလွန်လျင်မြန်စွာ dopaminergic မော်ဂျူကကမကထပြုခဲ့ခံရဖို့ပုံပေါ်42။ dopamine လျင်မြန်စွာပြောင်းလဲနေပါတယ်, ဤ dopamine အပြောင်းအလဲများကိုလျင်မြန်စွာလှုံ့ဆျောမှုကိုအကျိုးသက်ရောက်ကတည်းက dopamine များ၏စိတ်ခွန်အားနိုးလုပ်ဆောင်ချက်များကိုပိုကောင်း ( "phasic") အစာရှောင်ခြင်းအဖြစ်ဖော်ပြနေကြပါတယ်, ( "လုပ်သူများ") နှေးဘူး။
ထို့အပြင်မြန်ဆန်ပြီးနှေးကွေးသောအချိန်အတိုင်းအတာကိုအသုံးပြုခြင်းသည် dopamine receptors နှင့်အာရုံခံဆဲလ်များကြုံတွေ့ရသော decoding ပြproblemနာကိုသူ့ဟာသူမဖြေရှင်းနိုင်ပါ။ အကယ်၍ dopamine အချက်အလက်များလေ့လာပါက synaptic plasticity ၏ modulation သည်သင့်လျော်သောဆယ်လူလာတုန့်ပြန်မှုဖြစ်ပုံရသည်။ သို့သော်လှုံ့ဆော်မှုရှိသောအပြုအမူအပေါ်ချက်ချင်းအကျိုးသက်ရောက်မှုများကရိုက်ခြင်းအပေါ်ချက်ချင်းအကျိုးသက်ရောက်သည် - ဥပမာစိတ်လှုပ်ရှားလွယ်မှုလျင်မြန်စွာပြောင်းလဲခြင်း။ Dopamine သည်ဤ postynaptic သက်ရောက်မှုများ (နှင့်အခြားအရာများ) နှစ်ခုလုံးကိုဖြစ်စေနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့် dopamine ပါဝင်မှုသည်တိကျသောအဓိပ္ပာယ်ရှိသနည်း။ သို့မဟုတ်ဤအဓိပ္ပာယ်ကိုတည်ဆောက်ရန်လိုအပ်ပါသလား - ဥပမာ dopamine level ကိုအချိန်နှင့်နှိုင်းယှဉ်ခြင်းဖြင့်သို့မဟုတ်မည်သည့်ဆယ်လူလာစက်ပစ္စည်းကိုမည်သည့်ဆက်သွယ်ရေးစက်နှင့်ထိတွေ့နိုင်သည်ကိုဆုံးဖြတ်ရန်အခြားတိုက်ဆိုင်သောအချက်ပြများကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်? ဒီဖြစ်နိုင်ခြေကိုအောက်တွင်ဆက်လက်ဆွေးနွေးထားသည်။
dopamine လွှတ်ပေးရန် dopamine ဆဲလ်ပစ်ခတ်ရန်ကဲ့သို့တူညီသောသတင်းအချက်အလက်များဖော်ပြပါသလား?
အစာရှောင်ခြင်း dopamine အတက်အကျနှင့်စိတ်ခွန်အားနိုးတနျဖိုးအကြားဆက်ဆံရေး dopamine ဆဲလ်ပစ်ခတ်ရန်အစား RPE နဲ့တူအောင်ပေးထူးဆန်းတဲ့ပုံရသည်။ ထို့ပြင်အချို့သောလေ့လာမှုတွေ mesolimbic dopamine လွှတ်ပေးရန်အတွက် RPE အချက်ပြမှုများကိုအစီရင်ခံတင်ပြကြပါပြီ43။ အာရုံကြောအချက်အလက်အချို့ကိုဘာသာပြန်ရာတွင်စိန်ခေါ်မှုတစ်ရပ်ကိုမှတ်သားရန်အရေးကြီးသည်။ Value အချက်ပြမှုနှင့် RPE များသည်တစ်ခုနှင့်တစ်ခုဆက်စပ်မှုရှိသည်။ အံ့အားသင့်စရာတော့မဟုတ်ပါ။ RPE ကိုပုံမှန်အားဖြင့်တစ်မိနစ်မှနောက်တစ်ခုသို့ပြောင်းသွားသည် (အံ့သြစရာမဟုတ်ပါ) ။ သောကြောင့်ဒီဆက်စပ်မှုကြောင့်စမ်းသပ်ဒီဇိုင်းများကိုအသုံးပြုရန်အရေးကြီးသည်နှင့် RPE အကောင့်များနှင့်တန်ဖိုးကိုခွဲခြားကြောင်းဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်း။ ဆန့်ကျင်ဘက်အချက်ပြပြောင်းလဲမှုထက်ဆွေမျိုးထက်မှီခိုသောအာရုံကြောအတိုင်းအတာကိုအသုံးပြုသောအခါပြwhenနာပိုဆိုးလာသည်။ Voltammetry ဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းသည် dopamine ကိုစိတ် ၀ င်စားစရာအချိန်တစ်ချိန်ချိန်နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကစမ်းသပ်မှုတစ်ခုချင်းစီ၏“ အခြေခံ” ယုဂ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက (dopamine မမှီခိုသောအချက်ပြအစိတ်အပိုင်းများကိုဖယ်ထုတ်ရန်၊ ဗို့အားတစ်ခုချင်းစီတွင်လျှပ်ကူးပစ္စည်းအားသွင်းခြင်းနှင့်မိနစ်ပိုင်းအတွင်းပျံ့နှံ့ခြင်း) ။ သို့သော်အခြေခံတစ်ခုကိုဖယ်ထုတ်လိုက်လျှင် value signal သည် RPE signal နှင့်ဆင်တူနိုင်သည်။ ဒါကငါတို့ကိုယ်ပိုင် voltammetry ဒေတာမှာကြည့်တာပါ (သင်္ဘောသဖန်း။ 2e) ။ တဦးတည်းပဲစမ်းသပ်မှုတွေကိုဖြတ်ပြီးတစ်ဦးစဉ်ဆက်မပြတ်အခြေခံယူဆလျှင်ဆုလာဘ်မျှော်လင့်အတွက်အပြောင်းအလဲများအစောပိုင်းတစ်ခုချင်းစီစမ်း dopamine အာရုံစူးစိုက်မှုပြောင်းလဲမှုများတွင်ထင်ဟပ်ခဲ့ကြ, ဤအပြောင်းအလဲများကိုလွဲချော်နေကြ15။ dopamine ထုတ်လွှတ်မှုနှင့် RPE သင်္ကေတများနှင့် ပတ်သက်၍ နိဂုံးချုပ်ချက်များကိုသတိဖြင့်ကြည့်ရှုရန်လိုအပ်သည်။ ဤအချက်အလက်များအနက်အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်သည် voltammetry သာမကဘဲဆွေမျိုးအပြောင်းအလဲများအပေါ်မှီခိုနေသောမည်သည့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုနှင့်မဆိုသက်ဆိုင်နိုင်သည်။44.
မည်သို့ပင်ဆိုစေကျနော်တို့နေဆဲ dopamine အာရုံခံခြင်းဖြင့်တန်ဖိုးကို-related Spike ၏တသမတ်တည်းမရှိခြင်းနှင့်အတူ NAc core ကိုအတွက်တန်ဖိုးကို-related dopamine လွှတ်ပေးရန်ပြန်လည်သင့်မြတ်ရန်လိုအပ်13ပင် NAc core ကိုမှ dopamine ထောက်ပံ့သောနှစ်ဦးနှစ်ဖက် VTA ဧရိယာအတွင်း45။ တဦးတည်းအလားအလာအချက် dopamine လွှတ်ပေးရန်ပုံမှန်အားဖြင့်တက်ကြွစွာမိမိတို့၏ပတ်ဝန်းကျင်မှတဆင့်ရွေ့လျားထိန်းအကွပ်မရှိသောတိရိစ္ဆာန်များအတွက်တိုင်းတာနေချိန်မှာ dopamine ဆဲလ်တွေပုံမှန်အားဖြင့်, ဂန္အေးစက်တာဝန်များကိုဖျော်ဖြေခေါင်းကို-ထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်းတိရိစ္ဆာန်များတှငျမှတျတမျးတငျထားသဖြစ်ကြောင်းဖြစ်ပါသည်။ ကျနော်တို့ mesolimbic dopamine အထူးသ "အလုပ်" ၏တန်ဖိုးကိုညွှန်ပြအံ့သောငှါအဆိုပြုထား15 - ၎င်းသည်ဆုရရှိရန်အတွက်အချိန်နှင့်အားစိုက်ထုတ်ခြင်းအတွက်လိုအပ်ချက်ကိုထင်ဟပ်စေသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဤအချက်နှင့်အညီ dopamine သည်ရွေ့လျားမှုကိုညွှန်ကြားသည့်အချက်ပြမှုနှင့်အတူတိုးပွားသည်။46။ အကယ်၍ - ဂန္ထဝင်အေးစက်သည့်အလုပ်များကဲ့သို့ - တက်ကြွသော“ အလုပ်” အတွက်အကျိုးမရှိပါကအလုပ်၏တန်ဖိုးကိုညွှန်ပြသည့် dopaminergic အပြောင်းအလဲများသည်သိသာမှုနည်းပါးနိုင်သည်။
ပို. ပင်အရေးကြီးသော dopamine လွှတ်ပေးရန်ဒေသအလိုက်အဆိုပါဆိပ်ကမ်းသူတို့ကိုယ်သူတို့မှာထိန်းချုပ်နိုင်ပါတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုဖြစ်နှင့်, အရှင်ဆဲလ်ခန္ဓာကိုယ် Spike ၏လွတ်လပ်သော spatio-ယာယီပုံစံများကိုပြသလိမ့်မည်။ ဥပမာ, basolateral amygdala (BLA) VTA inactivated ဖြစ်ပါတယ်လျှင်ပင် NAc dopamine လွှတ်ပေးရန်လွှမ်းမိုးနိုင်သည်47။ ပြောင်းပြန် BLA inactivating ပုံ VTA ပစ်ခတ်ရန်ထိခိုက်ခြင်းမရှိဘဲ, NAc dopamine လွှတ်ပေးရန်နှင့်သက်ဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုအပြုအမူလျော့ကျစေပါတယ်48။ Dopamine ဆိပ်ကမ်းအချိုမှု, opioids နှင့် acetylcholine အပါအဝင် neurotransmitters တစ်အကွာအဝေး, အဘို့ receptors ရှိသည်။ နီကိုတင်း acetylcholine receptors striatal cholinergic interneurons (CINs) လျှင်မြန်စွာ dopamine လွှတ်ပေးရေးကိုထိန်းချုပ်ခွင့်ပြု49,50။ ဒါဟာတာရှည် dopamine လွှတ်ပေးရေးဒေသခံထိန်းချုပ်မှုအလားအလာအရေးကြီးသောကြောင်းမှတ်ချက်ပြုခဲ့ပေမဲ့7,51ဒါကြောင့် dopamine function ကို၏ကွန်ပျူတာအကောင့်တွင်ထည့်သွင်းခဲ့ပြီးမထားပါဘူး။ ငါ coding ကိုတန်ဖိုးထားဖို့ related dopamine လွှတ်ပေးရန်ဒိုင်းနမစ်တဆင့်အကြီးအကျယ်ပေါ်ထွန်းကြောင်းအဆိုပြု ဒေသဆိုင်ရာ dopamine ဆဲလ်ပစ်ခတ်ရန်သင်ယူမှုများအတွက်အရေးကြီးသော RPE ကဲ့သို့အချက်ပြမှုများကိုထောက်ပံ့ပေးသကဲ့သို့ထိန်းချုပ်မှု။
ဘယ်လိုစိတ်ရှုပ်ထွေးမှုများမပါဘဲသင်ယူမှုနှင့်လှုံ့ဆျောမှုနှစ်ခုလုံးကိုဆိုလို dopamine နိုင်မလဲ?
ယာယီ-ခြားနားချက် RPEs ရိုးရှင်းစွာတန်ဖိုးလျင်မြန်စွာအပြောင်းအလဲများကို (များမှာကတည်းကနိယာမမှာတော့တန်ဖိုး signal ကို, အဖြစ်ကောင်းစွာ RPE သိရှိစေရန်လုံလောက်သောဖြစ်ပါသည်သင်္ဘောသဖန်း။ 2B) ။ ဥပမာအားဖြင့်, ပစ်မှတ်အာရုံခံအတွက်ကွဲပြား intracellular လမ်းကြောင်း (RPE ကိုယ်စားပြု) အာရုံစူးစိုက်မှုအတွက်အစာရှောင်ခြင်းဆွေမျိုးအပြောင်းအလဲများကိုနှိုင်းယှဉ် (value ကိုကိုယ်စားပြု) dopamine ၏အကြွင်းမဲ့အာဏာအာရုံစူးစိုက်မှုမှကွဲပြားခြားနားအထိခိုက်မခံဖြစ်လိမ့်မယ်။ ဤသည်အစီအစဉ် spiny အာရုံခံဆဲလျဇီဝြဖစ်စဉ်များရှုပ်ထွေး dopamine မော်ဂျူပေးသော, ယုတ္တိတန်သည်ဟုဆိုရမည်ပုံရသည်52 နှင့်ကယ်လစီယမ်အာရုံစူးစိုက်မှု၏ယာယီပုံစံများ၎င်းတို့၏ sensitivity ကို53။ သို့သျောလညျးဒီလည်းအတန်ငယ်မလိုအပ်တဲ့ပုံရသည်။ တစ်ဦး RPE တူသောအချက်ပြပြီးသား dopamine ဆဲလ် Spike အတွက်တည်ရှိပါကမဟုတ်ဘဲတန်ဖိုး signal ကိုထံမှ re-deriving RPE ထက်အသုံးပြုဖြစ်နိုင်သင့်၏။
သင့်လျော်စွာကွဲပြား RPE နှင့်တန်ဖိုးအချက်ပြမှုများကိုသုံးစွဲဖို့, dopamine-လက်ခံရရှိသူဆားကစ်တက်ကြွစွာသူတို့ dopamine အနက်ကိုဘော်ပြဘယ်လိုအကူးအပြောင်းဖြစ်နိုင်သည်။ acetylcholine လည်းဒီ switching အခန်းကဏ္ဍအစေခံစေခြင်းငှါစိတ်ဝင်စားဖွယ်သက်သေအထောက်အထားများရှိပါသည်။ dopamine ဆဲလ်တွေမမျှော်လင့်ဘဲတွေကိုမှ spikes ၏ပြီးတော့ Activision နေတာပစ်ခတ်အဖြစ်တစ်ချိန်တည်းမှာပင်, CINs အကျဉ်း (~ 150ms) ကိုပြသ အားလပ်ချိန် RPEs နှင့်အတူစကေးမထားတဲ့, ပစ်ခတ်အတွက်54။ ဤရွေ့ကား Cin ဖြင့်ခေတ္တ VTA GABAergic အာရုံခံခြင်းဖြင့်မောင်းနှင်နိုင်ပါတယ်55 အဖြစ် intralaminar thalamus တွင် "အံ့သြစရာ" -related ဆဲလ်များနှင့်သင်ယူမှုမြှင့်တင်ကာ Associates signal ကိုအဖြစ်ဆောင်ရွက်ရန်အဆိုပြုခဲ့ကြ56။ မောရစ်နှင့် Bergman အကြံပြု54 ကြောင်း cholinergic ဖြင့်ခေတ္တ dopamine တစ်ဦးသင်ယူမှု signal ကိုအဖြစ်အသုံးပြုနိုင်သည့်ကာလအတွင်း striatal plasticity များအတွက်ယာယီပြတင်းပေါက်သတ်မှတ်။ Dopamine-မှီခို plasticity စဉ်ဆက်မပြတ်တိုက်ရိုက်-လမ်းကြောင်း striatal အာရုံခံအပေါ် muscarinic m4 receptors အပါအဝင်ယန္တရားများအားဖြင့်နှိမ်နင်းနေသည်57။ intracellular အချက်ပြ၏မော်ဒယ်များ Cin ခဏရပ်နေ m4 ၏မရှိခြင်း binding phasic dopamine နှင့်အတူများ၏ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ရန်စေခြင်းငှါအကြံပြု PKA activation မြှင့်တင်ရန်သွားရမည်58, အားဖြင့် Synaptic ပြောင်းလဲမှုမြှင့်တင်ရန်။
Striatal cholinergic ဆဲလ်အရှင်သည် dynamically တစ် multiplexing dopaminergic သတင်းစကား၏အဓိပ္ပါယ်ကိုပြောင်းကောင်းမွန်စွာနေရာချထားဖြစ်ကြသည်။ Cin ခဏရပ်နေ Synaptic plasticity ကျော်တစ်ဦး muscarinic ပိတ်ပင်တားဆီးမှု၏ကယ်ဆယ်ရေးစခန်း dopamine သင်ယူမှုအတွက်အသုံးပြုခံရဖို့ခွင့်ပြုလိမ့်မယ်။ အခြားအချိန်များတွင် dopamine ဆိပ်ကမ်းကနေဖြန့်ချိဒေသအလိုက်ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသောအပြုအမူစွမ်းဆောင်ရည်ကိုထိခိုက်စေဖို့ထုဆစ်မည်ဖြစ်သည်။ လောလောဆယ်ဒီအကြံပြုချက်မှန်းဆခြင်းနှင့်မပြည့်စုံနှစ်ဦးစလုံးဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ CINs ထိုကဲ့သို့သော entropy အဖြစ်အသုံးဝင်သောကွန်ယက်ကို-Level အချက်ပြမှုများကို extract ဖို့အများကြီးပတျဝနျးကငျြ spiny အာရုံခံမှသတင်းအချက်အလက်ပေါင်းစည်းကြောင်းအဆိုပြုပြီးပါပြီ59,60။ သို့သော်ထိုသို့ Cin လှုပ်ရှားမှုဒိုင်းနမစ် dopamine တန်ဖိုးကိုအချက်ပြမှုများကို generate ဖို့အသုံးပြုနိုင်မှာအားလုံးရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရပါဘူး61နှင့်လည်းတံခါးဝ dopamine သင်ယူမှုအချက်ပြမှုများရန်။
dopamine အဆိုပါ forebrain တစ်လျှောက်လုံးနဲ့အတူတူပါပဲဆိုလိုပါသလား?
အဆိုပါ RPE စိတ်ကူးကိုင်ကြောင့် dopamine striatal နှင့်တိုကျရိုကျ cortical ပစ်မှတ်တစ်လျှောက်လုံး error message ကိုထုတ်လွှင့်နေတဲ့ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ signal ကိုခဲ့တာစိတ်ကူးခဲ့သည်။ Schultz VTA နှင့် SNc တစ်လျှောက်လုံးမျောက် dopamine ဆဲလ်တွေအလွန်ဆင်တူတုံ့ပြန်မှုရှိသည်သောအလေးပေးပြောကြားခဲ့သည်62။ ဖော်ထုတ် dopamine ဆဲလ်များ၏လေ့လာရေးမှာအနည်းဆုံးဂန္ထဝင်အေးစက်အခင်းအကျင်းအတွင်းနှစ်ဦးနှစ်ဖက် VTA အာရုံခံအဘို့, ကြွက်များတွင်အတော်လေးတစ်သားတည်းဖြစ်တည်ခြင်း RPE ကဲ့သို့တုံ့ပြန်မှုကိုလည်းတွေ့ကြပြီ13။ သို့သျောလညျး dopamine ဆဲလ်မော်လီကျူးများနှင့်ဇီဝကမ္မကွဲပြားခြားနားကြသည်63-65 သူတို့တိရစ္ဆာန်များပြုမူအတွက်ကွဲပြားခြားနားပစ်ခတ်ရန်ပုံစံများကိုပြသကြောင်းယခုအများအပြားအစီရင်ခံစာများရှိပါတယ်။ ဤရွေ့ကားဆန္ဒရှိဖြစ်ရပ်များမှပစ်ခတ်အတွက် phasic တိုးပါဝင်သည်66 နှင့်တွေကိုဖြစ်ပေါ်67 သောစံ RPE အကောင့်နဲ့ညံ့ဖျင်း fit ။ အတော်များများက dopamine ဆဲလ်တွေအံ့အားသင့်ထင်ဟပ်သို့မဟုတ် RPE coding တိကျတဲ့ထက်ပိုပြီး "သတိပေးနခွေငျးက" အာရုံခံဖြစ်ရပ်များမှကနဦးကာလတိုအောင်းနေချိန်တုံ့ပြန်မှုကိုပြသ68,69။ ဒါကသတိပေးနခွေငျးသှငျပွငျ SNc အတွက်ပိုပြီးထင်ရှားတဲ့ဖြစ်ပါသည်69, dopamine ဆဲလ် DLS ( "sensorimotor" dorsal / နှစ်ဦးနှစ်ဖက် striatum ဖို့ပိုပရောဂျက်ဘယ်မှာ45,63) ။ SNc dopamine ဆဲလ် Subpopulations ကိုလည်းတိုးမြှင့်ဖို့အစီရင်ခံခဲ့ကြ41 သို့မဟုတ်လျော့နည်း70 ပင်ပြင်ပတွေကိုမရှိဘဲအလိုအလျောက်လှုပ်ရှားမှုတွေနှင့် တွဲဖက်. ပစ်ခတ်။
အတော်ကြာအုပ်စုများ dopamine အာရုံခံ၏ subpopulations ၏အမြောက်အများလှုပ်ရှားမှုဆနျးစစျဖို့ဖိုင်ဘာ photometry နှင့်ကယ်လစီယမ်ညွှန်ပြချက် GCaMP ကိုအသုံးပြု71,72။ DLS မှထုတ်လုပ်တဲ့သူတွေကိုတိုးချဲ့လှုပ်ရှားမှုပြသနေစဉ် dorsal / medial striatum (DMS) မှပရောဂျက်တစ်ခုကို Dopamine ဆဲလ်တွေ, မျှော်လင့်မထားတဲ့အကျဉ်းလှုပ်ခြင်းမှယာယီစိတ်ဓာတ်လှုပ်ရှားမှုပြသ71- သတိပေးတုံ့ပြန်မှုနှင့်ပိုမိုကိုက်ညီမှုရှိသည်။ ကွဲပြားခြားနားသော forebrain ခွဲများအတွက်ကွဲပြား dopaminergic တုံ့ပြန်မှုကိုလည်း dopamine axon နှင့်ဆိပ်ကမ်းများ၏လှုပ်ရှားမှုဆန်းစစ် GCaMP သုံးပြီးလေ့လာတွေ့ရှိခဲ့ကြသည်40,72,73။ ဦးခေါင်း-ထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်းကြွက်တွေမှာ Two-ဖိုတွန်ပုံရိပ်အသုံးပြုခြင်း, Howe နှင့် Dombeck40 အလိုအလျောက်လှုပ်ရှားမှုတွေနှင့်ဆက်စပ်သော phasic dopamine လှုပ်ရှားမှုကဖော်ပြခဲ့သည်။ NAc အတွက် VTA dopamine axon ပေးပို့ဆုချဖို့ပိုပြီးတုန့်ပြန်နေချိန်တွင်ဤသည်အဓိကအား, dorsal striatum အတွက်ရပ်စဲကြောင်း SNc ထံမှတစ်ဦးချင်းစီ dopamine axon တွင်တွေ့မြင်ခဲ့ရသည်။ DMS အစားပိုပြီး contralateral လုပ်ရပ်များနှင့်ဆက်စပ်နှင့်အတူအခြားသူများကလည်း, NAc အတွက်ဆုလာဘ်-related dopaminergic လှုပ်ရှားမှုတွေ့ရှိခဲ့72 ဆန္ဒရှိနှင့်ဝတ္ထုလှုံ့ဆော်မှုနှင့် striatum ရဲ့ posterior အမြီးတုံ့ပြန်မှု74.
dopamine လွှတ်ပေးရန်၏တိုက်ရိုက်အစီအမံကိုလည်းငျဒသေအကြားပင်သောင်းပြောင်းထွေလာရောနှောထုတ်ဖေါ်30,75။ microdialysis အားဖြင့်ငါတို့သည်အထူးသ NAc core နဲ့ ventral-medial တိုကျရိုကျ cortex အတွက်မဟုတ်ဘဲ striatum ၏အခြား medial အစိတ်အပိုင်းများ (NAc shell ကို, DMS) သို့မဟုတ်တိုကျရိုကျ cortex အတွက်တန်ဖိုးဆက်နွယ်နေကြောင်းခံရဖို့ dopamine တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ကတသမတ်တည်းလူ့ fMRI လေ့လာမှုများလေ့လာမှုများတွင်တွေ့မြင် coding တန်ဖိုးနှစ်ခုကို "ဟော့စပေါ့" ကိုကောင်းစွာ map ပုံအတိုင်းဤစိတ်ဝင်စားဖွယ်ဖြစ်ပါသည်76,77။ အထူးသဖြင့် dopamine အချက်ပြမှရငျးနှီးတဲ့ဆကျဆံရေးရှိပါတယ်ရသော NAc BOLD signal ကို,78, အကျိုးကိုမျှော်လင့် (တန်ဖိုး) နှင့်အတူတိုးပွားလာ - RPE နှင့်အတူထက်ပို76.
dopamine လွှတ်ပေးရန်ဤ Spatial ပုံစံများကွဲပြား dopamine ဆဲလ် subpopulations ၏ပစ်ခတ်ရန်, dopamine လွှတ်ပေးရေးဒေသခံထိန်းချုပ်ရေး, ဒါမှမဟုတ်နှစ်ဦးစလုံးထံမှပေါ်ထွန်းပဲဖြစ်ဖြစ်, သူတို့တစ်တွေကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ dopamine သတင်းစကားများ၏စိတ်ကူးကိုစိန်ခေါ်။ တဦးတည်း ventral striatum အချက်ပြ "ဆုလာဘ်" တွင် (ဥပမာ) dorsal striatum အချက်ပြ "လှုပ်ရှားမှု" တွင် dopamine နဲ့ dopamine နှင့်အတူများစွာသောကွဲပြားခြားနားသော dopamine လုပ်ဆောင်ချက်များကိုရှိပါတယ်ကောက်ချက်ချစေခြင်းငှါ,40။ ဒါပေမယ့်အခြားအယူအဆရေးရာချဉ်းကပ်မျက်နှာသာ။ ကွဲပြားခြားနားသော striatal ငျဒသေကွဲပြားခြားနားသော cortical ဒေသများထံမှသွင်းအားစုရ, ဒါကြောင့်အချက်အလက်များ၏ကွဲပြားခြားနားသောအမျိုးအစားများကို processing လိမ့်မည်။ သို့သျောလညျး D1- အဲဒီ receptor သာရှိပြီးပြည်ပမှသီးခြား D2- အပါအဝင်တစ်ဦးချင်းစီ striatal မဟာမဲခေါင်ဒေသတွင်းအစုရှယ်ယာတစ်ဘုံ microcircuit ဗိသုကာ, spiny အာရုံခံဆောင်သော79ဒါကြောင့်ထွက်, CINs နှင့်။ ဒါဟာအမျိုးမျိုးသော striatal ငျဒသေ (ဥပမာ DLS, DMS, NAc core ကို) ကိုရည်ညွှန်းဖို့ဘုံဖြစ်သော်လည်းသူတို့ discrete ဒေသများဖြစ်ကြသည်လျှင်အဖြစ်, သူတို့ကိုအကြားအဘယ်သူမျှမချွန်ထက်ခန္ဓာဗေဒနယ်နိမိတ် (NAc shell ကိုနည်းနည်းပိုပြီး neurochemically ကွဲပြားသည်) ရှိပါတယ်။ အဲဒီအစားအများသုံးကွန်ပျူတာတွင် algorithm ကို၏ parameters တွေကိုမှအပြောင်းအလဲများကဲ့သို့ပိုပြီးဟန်စသည်တို့ကိုအဲဒီ receptor သိပ်သည်းဆ, interneuron အချိုးအစားအတွက်ပဲနူးညံ့သိမ်မွေ့ gradients, ရှိပါတယ်။ ဒီဘုံဗိသုကာပေးထားကျနော်တို့တစ်ဦးချင်းစီမဟာမဲခေါင်ဒေသတွင်းနေဖြင့်ကိုင်တွယ်ခံရသည့်တိကျသောသတင်းအချက်အလက်ဝေး abstracted တစ်ဘုံ dopamine function ကိုဖော်ပြရန်နိုင်မလဲ?
Striatal dopamine နဲ့ကန့်သတ်အရင်းအမြစ်များခွဲဝေချထား။
ငါဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသောအပြုအမူအပေါ်လူထုကို dopamine သက်ရောက်မှုအမျိုးမျိုး၏မော်ဂျူအဖြစ်နားလည်သဘောပေါက်နိုင်အဆိုပြု သယံဇာတခွဲဝေဆုံးဖြတ်ချက်များ။ အထူးသ dopamine ကြောင့် striatal ငျဒသေအကြားမတူညီသောသီးခြားအရင်းအမြစ်နှင့်အတူတစ်ကန့်သတ်ပြည်တွင်းရေးအရင်းအမြစ်သုံးစွဲဘယ်လောက်ကျိုးနပ်၏ခန့်မှန်းချက်ပေးပါသည်။ "မော်တာ" striatum (~ DLS) အတွက်အရင်းအမြစ်ကုန်ကျစရိတ်စွမ်းအင်ရွေ့လျားနေသောကြောင့်န့်အသတ်ဖြစ်သည့်လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုဖြစ်သည်နှင့်များစွာသောလုပ်ရပ်များအချင်းချင်းသဟဇာတဖြစ်သောကြောင့်80။ တိုးပွားလာ dopamine တိရစ္ဆာန်ကြောင့်ရွှေ့ဖို့စွမ်းအင်ကိုသုံးနရကျိုးနပ်သည်ကိုဆုံးဖြတ်ရန်, ဒါမှမဟုတ်ပိုမြန်ရွှေ့မည်က ပို. စေသည်6,40,81။ encodes တစ် dopamine signal ကို "လှုပ်ရှားမှုကျိုးနပ်က" ပင် dopamine encoding က "လှုပ်ရှားမှု" မပါဘဲ, dopamine နဲ့လှုပ်ရှားမှုအကြားဆက်စပ်မှုကိုထုတ်လုပ်ဦးမည်မှတ်စု se နှုန်း.
"သိမြင်မှု" striatum (~ DMS) အတွက်အရင်းအမြစ်များကိုအဓိပ်ပါယျအားဖွငျ့-စွမ်းရည်ကန့်သတ်ထားသောအာရုံကို (အပါအဝင်သိမြင်မှုဖြစ်စဉ်များရှိပါတယ်82) နှင့်မှတ်ဉာဏ်အလုပ်လုပ်ကိုင်83။ ဒီထက်အာရုံစိုက်မှု-ထိုက်တန်ဟုယူဆလျှင်အဖြစ် dopamine မရှိရင်ပုံမှန်လှုပ်ရှားမှုများ orienting နှိုးဆော်ခြင်းကြောင့်အဓိကပြင်ပတွေကို, လစျြလြူရှုနေကြသည်3။ ထို့အပွငျတမင်တကာသိမြင်မှုထိန်းချုပ်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ marshaling အကုန်အကျ (အားထုတ်မှုပင်ဖြစ်သည်84) ။ Dopamine - အထူးသဖြင့် DMS အတွက်85 ဤကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုသည်ထိုက်တန်သလားဆုံးဖြတ်ရာတွင်အဓိကအခန်းကဏ္ plays မှပါ ၀ င်သည်86,87။ ဤသည်ကိုပိုပြီးသိမြင်-တောင်းဆိုမှုများ, deliberative ( "မော်ဒယ်-based") employ ဖို့ရှိမရှိဆုံးဖြတ်ချက်မဟာဗျူဟာများပါဝင်နိုင်ပါသည်88.
"စိတ်ခွန်အားနိုး" striatum (~ NAc) အတွက်တဦးတည်း key ကိုကန့်သတ်အရင်းအမြစ်တိရစ္ဆာန်ရဲ့အချိန်ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ တိရိစ္ဆာန်များလျှင်မြန်စွာဆုလာဘ်ရရှိရန်ရိုးရှင်းတဲ့, fixed အရေးယူလုပ်ဆောင်သည့်အခါ Mesolimbic dopamine မလိုအပ်ပါ89။ သို့သော်ဆုလာဘ်၏ပုံစံအမျိုးမျိုးသာတာရှညျအလုပ်မှတဆင့်ရယူနိုင်ပါတယ်: forage ၌ရှိသကဲ့သို့, unrewarded အရေးယူဆောင်ရွက်ချက်များပာတိုးချဲ့။ အလုပ်အတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့ရွေးချယ်ခြင်းအသုံးစရိတ်အချိန်တခြားအကျိုးရှိသောနည်းလမ်းများလွှတ်ရမည်ဟုဆိုလိုသည်။ အမြင့် mesolimbic dopamine ယာယီ-တိုးချဲ့, အားထုတ်မှုအလုပ်အတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံရကျိုးနပ်ကြောင်းညွှန်ပြပေမယ့် dopamine လျှော့ချကြောင့်တိရိစ္ဆာန်များနှောင့်ရှက်ပါဘူး, အစားမယ့်အိပ်စက်ခြင်းမှကွိုတငျပွငျဆငျစခွေငျးငှါ90.
အတွင်းဖြစ်ပွားနေသောအပြုအမူစီ cortico-striatal ကွင်းဆက် circuit ကို dopamine ရဲ့အလှူငွေအရှင်စီးပွားရေး (သယံဇာတခွဲဝေနှင့်အတူသက်ဆိုင်ရာ) နှင့်စိတ်ခွန်အားနိုးနှစ်ဦးစလုံးဖြစ်ပါတယ် (ကဟုတ်မဟုတ် ကျိုးနပ် အရင်းအမြစ်များကိုသုံးစွဲ81) ။ ဤရွေ့ကားဆားကစ်အပြည့်အဝလွတ်လပ်သောမဟုတ်မဟုတ်ဘဲတစ်ဦး hierarchical, တွေအကြောင်းအဖှဲ့အစညျးရှိသည်: ပိုပြီး dorsal ဝေမျှဖို့ပရောဂျက်တစ်ခုကို striatum သြဇာလွှမ်းမိုးမှု dopamine ဆဲလ်တွေပို ventral ဝေမျှ5,91။ ဤနည်းအားဖြင့်အလုပ်တွင်ပါ ၀ င်ရန်ဆုံးဖြတ်ချက်များသည်လိုအပ်သောတိကျပြတ်သားသောလှုပ်ရှားမှုများကိုပိုမိုအားကောင်းစေသည်။ သို့သော်ယေဘူယျအားဖြင့် dopamine သည်“ activational” အချက်ပြမှုများကိုပေးပြီးဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်သည့်အလားအလာကိုတိုးမြှင့်သည်။ ဘယ်လို အရင်းအမြစ်များကိုသုံးစွဲရပါမည်5.
ဆုံးဖြတ်ချက်များကိုထားကြပါတယ်အဖြစ် dopamine ၏ကွန်ပျူတာအခန်းကဏ္ဍကဘာလဲ?
ဒီ Activity အခန်းကဏ္ဍနှင့် ပတ်သက်. စဉ်းစားတစ်ခုမှာလမ်းဆုံးဖြတ်ချက်ချ "တံခါး" ၏စည်းကမ်းချက်များ၌ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့တစ်တွေတံခါးခုံအဆင့်ကိုရောက်ရှိဖို့သည်အထိအချို့သင်္ချာမော်ဒယ်တွေအတွက်ဆုံးဖြတ်ချက်စနစ်လုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခုမှကျူးလွန်ဖြစ်လာသည့်အခါ, တိုး process လုပ်တယ်92။ ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကပိုလျှင်မြန်စွာရောက်ရှိနေကြပါတယ်ဒါကြောင့်မြင့်မားတဲ့ dopamine, တစ်ဦးအနိမ့်အကွာအဝေး-to-တံခါးခုံကိုညီမျှပါလိမ့်မယ်။ ဒါကစိတ်ကူးရိုးရှင်းတဲ့ဖြစ်ပါသည်, သေးအတည်ပြုခဲ့သည်ခဲ့ကြကြောင်းအရေအတွက်ဟောကိန်းများကိုမှန်ကန်စေသည်။ လှုပ်ရှားမှုများအတွက်တံခါးလျှော့ချစိတ်ကြွဆေး sensorimotor striatum သို့ထုံမွှန်းအခါတှေ့မွငျရမယ့်ဘာတုံ့ပြန်မှုအချိန်ဖြန့်ဖြူးများ၏အသွင်သဏ္ဌာန်တစ်ခုသတ်သတ်မှတ်မှတ်ပြောင်းလဲမှုဖြစ်ပေါ်စေလိမ့်မည်ဟု20.
ဆုံးဖြတ်ချက်များ ပို. ပို. အရေးတကြီးဖြစ်လာလျှင်အဖြစ်တံခါးခုံ, အချိန်ကျော်လျော့ချမယ်ဆိုရင်အဲဒီအစား fixed တံခါးခုံထက်, အမူအကျင့်များနှင့်အာရုံကြောဒေတာပိုကောင်းမထိုက်မတန်ဖြစ်နိုင်သည်။ Basal ganglia output ကို cortex အတွက်ရွေးချယ်ရေးယန္တရားများ invigorates သောသည် dynamically-ဖြစ်ပေါ်နေသောအရေးတကြီး signal ကို, ပေးအဆိုပြုပြီးပါပြီ93။ အနာဂတ်ဆုလာဘ်တန်ဖိုးကိုနိုင်တဲ့ coding, dopamine ၏ Active အခန်းကဏ္ဍနှင့်ဆင်တူသည်ဤအယူအဆအောင်, အချိန်အတွက်ပိုမိုနီးကပ်စွာသောအခါအရေးတကြီးလည်း သာ. ကြီးမြတ်ဖြစ်ခဲ့သည်။
ထိုကဲ့သို့သော Active အခန်းကဏ္ဍ striatal dopamine များ၏စွမ်းဆောင်ရည်-ပြောင်းလဲသက်ရောက်မှုကိုဖော်ပြရန်လုံလောက်သောလား? ဤသည် Basal ganglia ဆားကစ်ကိုတိုက်ရိုက်သင်ယူလုပ်ရပ်များအကြားကို select ရှိမရှိများ၏နှစ်ရှည်လများမေးခွန်းကိုဆက်စပ်ဖြစ်ပါသည်80 သို့မဟုတ်မျှသာတခြားနေရာကိုဖန်ဆင်းရွေးချယ်မှု invigorate93,94။ dopamine တစ်ဦးထက်ပိုသော "directional" အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသည်ဖို့ပေါ်လာနိုင်သည့်အနည်းဆုံးနည်းလမ်းနှစ်ခုရှိပါတယ်။ dopamine မူလကပင် directional သတင်းအချက်အလက် process လုပ်တယ်တဲ့ဦးနှောက်မဟာမဲခေါင်ဒေသတွင်းအတွင်းပြုမူလာသောအခါပထမဦးဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ Basal ganglia ဆားကစ်တစ်ခုအရေးကြီးသော, တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း-lateral အခန်းကဏ္ဍဆီသို့ဦးတည် orienting နှင့်အလားအလာဆုလာဘ်ချဉ်းကပ်ရှိသည်။ အဆိုပါမျောက် caudate (~ DMS) contralateral Spatial လယ်ကွင်းဆီသို့မျက်စိလှုပ်ရှားမှုများကိုကားမောင်းများတွင်ပါဝင်ပတ်သက်ဖြစ်ပါသည်95။ contralateral အာကာသအတွင်းတစ်ခုခုဆီသို့ဦးတည် orienting တန်ဖိုးရှိကြောင်းကိုတစ်ဦးက dopaminergic signal ကို DMS နှင့် contralateral လှုပ်ရှားမှုတွေအတွက် dopaminergic လှုပ်ရှားမှုအကြားလေ့လာတွေ့ရှိဆက်စပ်မှုများအတွက်အကောင့်စေခြင်းငှါ72dopamine ထိန်းသိမ်းရေးထုတ်လုပ်, အဖြစ်အလှည့်အမူအကျင့်96။ (နှစ်နိုင်ငံ) dopamine ကိုတွေ့ရှိရပါသည်မဟုတ်ဘဲ High-အားထုတ်မှု / High-ဆုလာဘ်အခြားနည်းလမ်းထက်နိမ့်ကြိုးစားအားထုတ်မှု / Low-ဆုလာဘ်ရွေးချယ်မှုဆီသို့ဦးတည်ကြွက်များနေကြပါတယ်သည့်အခါ dopamine ၏တစ်ဦးကစက္ကန့် "directional" သြဇာလွှမ်းမိုးမှုသိသာဖြစ်ပါသည်97။ ဤသည်မှာရှေးခယျြစရာတစျခုမှာ-a-အချိန်အကဲဖြတ်ကြွက် (လူသား) နဲ့အချို့သောဆုံးဖြတ်ချက်များကိုအပြိုင်ထက်ပိုအမှတ်စဉ်ဖြစ်ကြသည်ဆိုတဲ့အချက်ကိုရောင်ပြန်ဟပ်စေခြင်းငှါ98။ ဤအဆုံးဖြတ်ချက်အတွက်အခင်းအကျင်း dopamine နေဆဲ, လက်ရှိ-စဉ်းစားရွေးချယ်စရာ၏တန်ဖိုးသယ်ဆောင်ကအခြေခံကျကျ Active အခန်းကဏ္ဍပေးဆောင်စေခြင်းငှါပြီးတော့လက်ခံနိုင်သည့်သို့မဟုတ်မ24.
Active ကိုတိရိစ္ဆာန်များကိုမကြာခဏမြင့်မားတဲ့နှုန်းထားမှာမျိုးစုံအဆင့်ဆင့်မှာဆုံးဖြတ်ချက်များပါစေ။ တစ်ဦးချင်းစီဆုံးဖြတ်ချက်များနှင့် ပတ်သက်. စဉ်းစားကျော်လွန်ပါက (ပြည်နယ်တစ်ခု sequence ကိုတဆင့်အနေနဲ့ခြုံငုံလမ်းကြောင်းစဉ်းစားရန်အထောက်အကူဖြစ်နိုင်သည်သဖန်းသီး။ 1) ။ လာမယ့်, dopamine တပြည်နယ်ကနေအကူးအပြောင်းလွယ်ကူချောမွေ့အားဖြင့်သင်ယူဘယ်နေရာတွေမှာလဲလျှောက်စီးဆင်းမှုအရှိန်အဟုန်မြှင့်စေခြင်းငှါ99။ ဒီအမူအကျင့်များအချိန်ကိုက်ကျော် dopamine ၏အရေးကြီးသောသြဇာလွှမ်းမိုးမှုမှဆက်စပ်ခြင်းငှါ44,100။ အနာဂတ်အလုပျအတှကျတစျခုမှာ key ကိုရှေ့တန်းဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသောအပြုအမူအပေါ်ထိုကဲ့သို့သော dopamine သက်ရောက်မှုတစ်ခုတည်းဆဲလ်တွေ, microcircuits နှင့်အကြီးစား cortical-Basal ganglia ကွင်းအတွင်းသတင်းအချက်အလက်အပြောင်းအလဲနဲ့ပြောင်းလဲအသုံးပြုပုံ mechanistically ပေါ်ထွန်းဘယ်လိုတစ်ဦးပိုမိုနက်ရှိုင်းနားလည်မှုရဖို့ရန်ဖြစ်ပါသည်။ ဒါ့အပြင်ကျနော် striatal ပစ်မှတ်တစ်ခုအကွာအဝေးကိုဖြတ်ပြီး dopamine ၏ဘုံကွန်ပျူတာအခန်းကဏ္ဍအလေးပေးပြောကြားခဲ့သည်ကြပါပြီ, ဒါပေမယ့်အဓိကအား cortical ပစ်မှတ်လစျြလြူရှုနှင့်နှစ်ဦးစလုံးအဆောက်အဦများအတွက် dopamine လုပ်ဆောင်ချက်များကိုတူညီတဲ့မူဘောင်အတွင်းဖျောပွနိုငျရှိမရှိထင်ရှားစေခြင်းငှါနေဆဲဖြစ်သည်။
အကျဉ်းချုပ်မှာ, dopamine တစ်ခုလုံလောက်သောဖော်ပြချက် dopamine ရှုပ်ထွေးခြင်းမရှိဘဲ, တူညီတဲ့အစာရှောင်ခြင်းအချိန်အကြေးခွံပေါ်သင်ယူမှုနှင့်လှုံ့ဆျောမှုနှစ်ခုလုံးကိုအချက်ပြနိုင်ပါတယ်ဘယ်လိုရှင်းပြလိမ့်မယ်။ ဒါဟာ dopamine ဆဲလ်ပစ်ခတ်ရန်မသော်လည်းဆုလာဘ်မျှော်လင့်အတူ key ကိုပစ်မှတ် covaries အတွက်အဘယ်ကြောင့် dopamine လွှတ်ပေးရန်ရှင်းပြလိမ့်မယ်။ ထိုသို့လှုပ်ရှားမှုသိမှတ်ခံစားမှုနှင့်အချိန်ကိုက်အပေါ်လူထုကိုအမူအကျင့်အပေါ်သက်ရောက်မှုများကရှင်းပြသည်သောတခြားနေရာ striatum တစ်လျှောက်လုံး dopamine လုပ်ရပ်များတစ်စုစည်းကွန်ပျူတာအကောင့်များကိုလိမ့်မယ်။ ဤနေရာတွင်တင်ပြတချို့ကတိကျတဲ့စိတ်ကူးများမှန်းဆသော်လည်း, ပြုမှုအသစ်ဆွေးနွေးမှု, မော်ဒယ်နှင့်ခွဲစိတ်အသစ်များကိုစမ်းသပ်ချက် invigorate ရည်ရွယ်နေကြသည်။
ငါ Kent Berridge, ပတေရုဒါယန်းသည်, ဘရိုင်ယန် Knutson, Jeff Beeler, ပေတရု Redgrave ဂျွန် Lisman ယေရှဲ Goldberg, နှင့်အမည်မသိဒိုင်လူကြီးများအပါအဝင်အစောပိုင်းကစာသားကိုမူကြမ်းအပေါ်အမြင်မှတ်ချက်ပေးသူအများအပြားလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ငါအာကာသန့်အသတ်အများကြီးအရေးကြီးသောကြိုတင်လေ့လာမှုများ၏ဆှေးနှေးခ precluded ကြောင့်နောင်တရ။ မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောထောက်ခံမှုမူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုအပေါ်အာရုံကြောရောဂါများနှင့်လေဖြတ်အပေါ်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အင်စတီကျု, စိတ်ကျန်းမာရေးအမျိုးသားအင်စတီကျု, အမျိုးသားအင်စတီကျုအားဖြင့်ထောက်ပံ့ပေးခဲ့သညျ။
1. Ungerstedt ဦး အဆိုပါ nigro-striatal dopamine စနစ်၏ 6-hydroxydopamine သွေးဆောင်ယိုယွင်းပြီးနောက် Adipsia နှင့် aphagia. Acta Physiol Scand ပျော့ပျောင်း 367, 95-122 (1971) ။ [PubMed] [Google Scholar]
2. အိတ်အို နိုးထ။ နိုးထ (1973) ။
3. မာရှယ် JF, Levitan D နှင့် Stricker EM dopamine-depleting ဦးနှောက်ကိုတွေ့ရှိရပါသည်နှင့်အတူကြွက်များတွင် sensorimotor လုပ်ဆောင်ချက်များကို၏ activation-သွေးဆောင်ပွနျလညျထူထောငျ. J ကို comp Physiol Psychol 90, 536-46 (1976) ။ [PubMed] [Google Scholar]
4. Berridge KC, Venier IL နှင့်ရော်ဘင်ဆင် TE 6-hydroxydopamine-သွေးဆောင် aphagia ၏ reactivity ကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာအရသာ: dopamine function ကို၏ arousal နှင့် anhedonia ယူဆချက်များအတွက်ဂယက်ရိုက်. ပြုမူနေ neuroscience 103, 36-45 (1989) ။ [PubMed] [Google Scholar]
5. Salamone J ကိုနှင့်ကော်ရဲရားက M Mesolimbic Dopamine ၏နက်နဲသောအရာလှုံ့ဆော် Functions များ. အာရုံခံဆဲလျ 76, 470–485 (2012).doi:10.1016/j.neuron.2012.10.021 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
6. Mazzoni P ကို, Hristova A နှင့် Krakauer JW ကျွန်တော်တို့ဟာပိုမြန်မရွှေ့ပါဘူးအဘယ်ကြောင့်နည်း ပါကင်ဆန်ရောဂါ, လှုပ်ရှားမှုသန်စွမ်းနှင့်သွယ်ဝိုက်လှုံ့ဆျောမှု. J ကို neuroscience 27, 7105-16 (2007) .doi: 10.1523 / JNEUROSCI.0264-07.2007 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
7. Schultz W က မျောက်အတွက်အမူအကျင့်ခလုတ်လှုံ့ဆော်မှုမှ midbrain dopamine အာရုံခံ၏တုံ့ပြန်ချက်. neurophysiology ၏ဂျာနယ် 56, 1439-1461 (1986) ။ [PubMed] [Google Scholar]
8. Schultz W နှင့် Romo R ကို မျောက် midbrain ၏ Dopamine အာရုံခံ: ချက်ချင်းအပြုအမူတုံ့ပြန်မှုကိုဆွဲထုတ်လှုံ့ဆော်မှုမှတုံ့ပြန်မှုများပေါ်ဖြစ်ပေါ်. J ကို Neurophysiol 63, 607-24 (1990) ။ [PubMed] [Google Scholar]
9. ဂူ PR စနစ်ဒါယန်း P နှင့် Sejnowski တီဂျေ ကြိုတင်ခန့်မှန်းချက် Hebbian သင်ယူမှုအပေါ်အခြေခံပြီး mesencephalic dopamine စနစ်များများအတွက်တစ်ဦးကမူဘောင်. J ကို neuroscience 16, 1936-47 (1996) ။ [PubMed] [Google Scholar]
10 ။ Schultz W က, Apicella P နှင့် Ljungberg T က တစ်ဦးနှောင့်နှေးတုန့်ပြန်တာဝန်သင်ယူခြင်း၏အဆက်ဆက်ခြေလှမ်းများစဉ်အတွင်းဆုချမှမျောက် dopamine အာရုံခံ၏တုံ့ပြန်ချက်နှင့်အခြေအနေများကိုလှုံ့ဆော်မှု. J ကို neuroscience 13, 900-13 (1993) ။ [PubMed] [Google Scholar]
11 ။ Sutton သည် RS နှင့် Barto AG က အားဖြည့်သင်ယူမှု: တစ်ခုမိတ်ဆက်စကား။ အားဖြည့်သင်ယူမှု: တစ်ဦးမိတ်ဆက် (MIT ကစာနယ်ဇင်း: ကင်းဘရစ်, မက်ဆာချူးဆက်, 1998) ။ [Google Scholar]
12 ။ Cohen ကို JY, Haesler S က, Vong L ကို, ဝယျလျ BB နှင့် Uchida N ကို အဆိုပါ ventral tegmental ဧရိယာ၌ဆုလာဘ်များနှင့်ပြစ်ဒဏ်အဘို့အအာရုံခံဆဲလျ-type အမျိုးအစား-တိကျတဲ့အချက်ပြ. သဘာဝ 482, 85–8 (2012).doi:10.1038/nature10754 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
13 ။ Eshel N ကို, Tian J ကို, Bukwich M နှင့် Uchida N ကို Dopamine အာရုံခံဆုလာဘ်ခန့်မှန်းအမှားများအတွက်ဘုံတုံ့ပြန်မှု function ကိုဝေမျှ. နတ် neuroscience 19, 479–86 (2016).doi:10.1038/nn.4239 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
14 ။ Steinberg EE, Keiflin R ကို, Boivin JR, Witten ခလရ, Deisseroth K နှင့် Janak PH သည် ခန့်မှန်းအမှားအယွင်းများ, dopamine အာရုံခံခြင်းနှင့်သင်ယူမှုတို့အကြားတစ်ဦးကကြောင်းကျိုးဆက်စပ် link ကို. နတ် neuroscience (2013) .doi: 10.1038 / nn.3413 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
15 ။ ဟာမစ် AA ကို, Pettibone JR, Mabrouk OS ကို, Hetrick VL, Schmidt က R ကို, Vander Weele CM, ကနေဒီ RT ကို, Aragona BJ နှင့် Berke JD Mesolimbic dopamine အလုပ်၏တန်ဖိုးအချက်ပြလိုက်ခြင်း. နတ် neuroscience 19, 117–26 (2016).doi:10.1038/nn.4173 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
16 ။ Yagishita S က, Hayashi-Takagi တစ်ဦးက, အဲလစ်-ဒေးဗီးစ် GC, Urakubo H ကို, Ishii S နှင့် Kasai H ကို dendritic ကျောရိုး၏ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ plasticity အပေါ် dopamine လုပ်ဆောင်ချက်များအတွက်တစ်ဦးကဝေဖန်အချိန်ပြတင်းပေါက်. သိပ္ပံ 345, 1616–20 (2014).doi:10.1126/science.1255514 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
17 ။ Berke JD နဲ့ Hyman အရှေ့တောင် စွဲ, dopamine နှင့်မှတ်ဉာဏ်၏မော်လီကျူးယန္တရားများ. အာရုံခံဆဲလျ 25, 515-32 (2000) ။ [PubMed] [Google Scholar]
18 ။ Beeler ဂျာဖရန့် MJ, McDaid J ကိုအလက်ဇန္ဒားအီး, Turkson S က, Bernandez က MS, McGehee DS နှင့် Zhuang မှာ X ပါကင်ဆန်ရောဂါ၏ pathophysiology နှင့်ကုသမှုအတွက် dopamine-mediated သင်ယူမှုများအတွက်အခန်းကဏ္ဍ. cell ကိုယ်စားလှယ် 2, 1747–61 (2012).doi:10.1016/j.celrep.2012.11.014 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
19 ။ ငါသည်ပညာရှိ၏ဟု RA Dopamine, သင်ယူမှုနှင့်လှုံ့ဆျောမှု. နတ်ဗြာ neuroscience 5, 483-94 (2004) .doi: 10.1038 / nrn1406 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
20 ။ Leventhal DK, Stoetzner ကို C, အာဗြဟံ R ကို, Pettibone J ကို, DeMarco K နှင့် Berke JD sensorimotor striatum အတွင်းသင်ယူမှုနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်အပေါ် dopamine ၏ Dissociable ဆိုးကျိုးများ. Basal Ganglia 4, 43–54 (2014).doi:10.1016/j.baga.2013.11.001 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
21 ။ Wyvell CL နှင့် Berridge KC အချင်းချင်းအပြန်အလှန် accumbens စိတ်ကြွဆေး sucrose ဆုလာဘ်၏အခြေအနေမက်လုံးပေး salience တိုးပွါး: တိုးမြှင့် "ကဲ့သို့" သို့မဟုတ်တုံ့ပြန်မှုအားဖြည့်ခြင်းမရှိဘဲ "လို" ဆုလာဘ်များတိုးမြှင့်. J ကို neuroscience 20, 8122-30 ။ (2000) ။ [PubMed] [Google Scholar]
22 ။ Cagniard B, Beeler ဂျာ Britt JP, McGehee DS, Marinelli M နှင့် Zhuang မှာ X Dopamine အသစ်သောသင်ယူမှု၏မရှိခြင်းအတွက်စွမ်းဆောင်ရည် scales. အာရုံခံဆဲလျ 51, 541-7 (2006) .doi: 10.1016 / j.neuron.2006.07.026 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
23 ။ Shiner T က, Seymour B, Wunderlich K ကိုဟေးလ်ကို C, Bhatia KP ဒါယန်း P နှင့် Dolan RJ Parkinson ရောဂါကနေသက်သေအထောက်အထား: တစ်အားဖြည့်သင်ယူမှုလုပ်ငန်းတာဝန်များတွင် Dopamine နဲ့ performance. ဦးနှောက်ကို 135, 1871-1883 (2012) ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [Google Scholar]
24 ။ လူယာသည် SM ဒေါ် ND နှင့်ဂူ PR စနစ် မက်လုံးပေး salience များအတွက်ကွန်ပျူတာအလွှာ. ခေတ်ရေစီးကြောင်း neuroscience 26, 423-8 (2003) ။ [PubMed] [Google Scholar]
25 ။ Schultz W က ကွဲပြားခြားနားသောအချိန်သင်တန်းများမှာအကွိမျမြားစှာ dopamine လုပ်ဆောင်ချက်များကို. Annu ဗြာ neuroscience 30, 259-88 (2007) .doi: 10.1146 / annurev.neuro.28.061604.135722 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
26 ။ Gonon က F, Buri JB, Jaber M က, Benoit-Marand M က, Dumartin B နဲ့ Bloch B ကို ဂျီသြမေတြီနှင့်ကြွက် striatum နှင့် dopamine Transporter ချို့တဲ့ကြွက်တွေမှာ dopaminergic ဂီယာ၏ kinetics. prog ဦးနှောက် Res 125, 291-302 (2000) ။ [PubMed] [Google Scholar]
27 ။ Aragona BJ, Cleaveland NA, Stuber GD, နေ့ JJ, Carelli RM နှင့် Wightman RM နျူကလီးယပ်အတွင်း dopamine ဂီယာ၏ဦးစားပေးတိုးမြှင့်ကင်းများက shell ကို phasic dopamine လွှတ်ပေးရန်ဖြစ်ရပ်များအတွက်တိုက်ရိုက်တိုးဖို့ attribute ဖြစ်ပါတယ် accumbens. J ကို neuroscience 28, 8821–31 (2008).doi:10.1523/JNEUROSCI.2225-08.2008 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
28 ။ Owesson-White က, CA, Roitman MF, လေးလံနေတာတွေ့နေရ LA က, Belle လေး, Keithley RB, Peel JL, Carelli RM နှင့် Wightman RM နျူကလီးယပ် accumbens အတွက် dopamine ၏ပျမ်းမျှ extracellular အာရုံစူးစိုက်မှုမှပံ့ပိုးသတင်းရင်းမြစ်. J ကို Neurochem 121, 252–62 (2012).doi:10.1111/j.1471-4159.2012.07677.x [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
29 ။ Yapo ကို C, Nair AG က, Clement L ကို, ကက်စထရို LR, Hellgren Kotaleski J ကိုနှင့်ဗင်းဆင့် P ကို D1 နှင့် D2 striatal အလတ်စား spiny အာရုံခံခြင်းဖြင့် phasic dopamine ၏ detection. J ကို Physiol (2017) .doi: 10.1113 / JP274475 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
30 ။ လွတ်မြောက်ပြီ CR နှင့် Yamamoto ကယ် ဒေသဆိုင်ရာဦးနှောက် dopamine ဇီဝြဖစ်: အမြန်နှုန်းများအတွက်အမှတ်အသား, ဦးတည်ချက်များနှင့်တိရိစ္ဆာန်များရွေ့လျား၏ကိုယ်ဟန်အနေအထား. သိပ္ပံ 229, 62-65 (1985) ။ [PubMed] [Google Scholar]
31 ။ ထို Y ကိုဒေါ် ND, ယောလ: D နှင့်ဒါယန်း P ကို လုပ်သူများ dopamine: အခွင့်အလမ်းစရိတ်နှင့်တုန့်ပြန်သန်စွမ်း၏ထိန်းချုပ်မှု. Psychopharmacology (Berl) 191, 507–20 (2007).doi:10.1007/s00213-006-0502-4 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
32 ။ Strecker RE, Steinfels gf နှင့် Jacobs BL နို့တိုက်ကျွေးဖို့ဆက်ဆံရေးမရှိခြင်း, မွတ်မပြေနိုင်သောနှင့်ဂလူးကို့စထိုး: လွတ်လပ်စွာကြောင်ရွေ့လျားအတွက် Dopaminergic ယူနစ်လှုပ်ရှားမှု. ဦးနှောက် Res 260, 317-21 (1983) ။ [PubMed] [Google Scholar]
33 ။ Cohen ကို JY, Amoroso မဂ္ဂါဝပ်နှင့် Uchida N ကို Serotonergic အာရုံခံမျိုးစုံ timescales အပေါ်ဆုလာဘ်များနှင့်ပြစ်ဒဏ်အချက်ပြ. Elife 4, (2015) .doi: 10.7554 / eLife.06346 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
34 ။ Floresco SB အနောက် AR, Ash ကို B ကို, Moore က H ကိုနှင့်ကျေးဇူးတော်ရှိစေသတည်း AA ကို dopamine အာရုံခံဆဲလျပစ်ခတ်ရန်၏ Afferent မော်ဂျူ differential လုပ်သူများနှင့် phasic dopamine ဂီယာထိန်းညှိ. နတ် neuroscience 6, 968-73 (2003) .doi: 10.1038 / nn1103 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
35 ။ ကျေးဇူးတော်ရှိစေသတည်း AA ကို schizophrenia နှင့်စိတ်ကျရောဂါ၏ pathophysiology အတွက် dopamine စနစ်၏ Dysregulation. သဘာဝတရားအာရုံကြောသိပ္ပံ Reviews 17, 524 (2016) .doi: 10.1038 / nrn.2016.57 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
36 ။ Phillips က PE, Stuber GD, Heien ML, Wightman RM နှင့် Carelli RM Subsecond dopamine လွှတ်ပေးရေးကိုကင်းရှာအားပေးအားမြှောက်. သဘာဝ 422, 614-8 (2003) .doi: 10.1038 / nature01476 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
37 ။ Wassum KM, Ostlund SB နှင့် Maidment NT Phasic mesolimbic dopamine ရှေ့အချက်ပြနှင့်တစ်ဦး Self-အစပျိုးအရေးယူ sequence ကိုတာဝန်များ၏စွမ်းဆောင်ရည်ခန့်မှန်း. Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု 71, 846–54 (2012).doi:10.1016/j.biopsych.2011.12.019 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
38 ။ Howe မဂ္ဂါဝပ်, Tierney PL, Sandberg စင်ကာပူဒေါ်လာ, Phillips က PE များနှင့် Graybiel AM striatum အတွက်အချက်ပြကြာရှည် dopamine ဝေးကွာသောဆုလာဘ်၏နီးကပ်နှင့်တန်ဖိုးအချက်ပြလိုက်ခြင်း. သဘာဝ 500, 575–9 (2013).doi:10.1038/nature12475 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
39 ။ Satoh T က, Nakai S က, Sato T နှင့် Kimura M က dopamine အာရုံခံခြင်းဖြင့်ဆုံးဖြတ်ချက်၏လှုံ့ဆျောမှုနှင့်ရလဒ်ကို၏ဆက်စပ်မှုနိုင်တဲ့ coding. J ကို neuroscience 23, 9913-23 (2003) ။ [PubMed] [Google Scholar]
40 ။ Howe မဂ္ဂါဝပ်နှင့် Dombeck DA စက်ခေါင်းများနှင့်ဆုလာဘ်စဉ်အတွင်းကွဲပြား dopaminergic axon အတွက်လျင်မြန်စွာအချက်ပြ. သဘာဝ 535, 505–10 (2016).doi:10.1038/nature18942 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
41 ။ ဆေးလ်ဗား JAD, Tecuapetla က F, Paixão V နှငျ့ကော့စ RM အရေးယူဆောင်ရွက်မှုစတင်တံခါးတို့မတိုင်မီ Dopamine အာရုံခံဆဲလျလှုပ်ရှားမှုနှင့်အနာဂတ်လှုပ်ရှားမှုများကို invigorates. သဘာဝ 554, 244 (2018) .doi: 10.1038 / nature25457 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
42 ။ du Hoffman ဟာဂျေနှင့် Nicola သည် SM Dopamine ဟာနျူကလိယ accumbens အတွက် cue-evoked စိတ်လှုပ်ရှားမြှင့်တင်အားဖြင့်ဆုလာဘ်ရှာ invigorates. J ကို neuroscience 34, 14349–64 (2014).doi:10.1523/JNEUROSCI.3492-14.2014 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
43 ။ ဒရယ်ကဲ့သို့, Rutledge RB, Glimcher PW နှင့် Phillips က PE ကြွက်နျူကလိယအတွက် Phasic dopamine လွှတ်ပေးရန်အချိုးကျအကျိုးကိုခန့်မှန်းအမှားသက်တမ်း encodes accumbens. J ကို neuroscience 34, 698–704 (2014).doi:10.1523/JNEUROSCI.2489-13.2014 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
44 ။ ပျံဝဲ S က, Atallah BV နှင့် Paton JJ Midbrain dopamine အာရုံခံအချိန်တရားစီရင်ခြင်းကိုထိန်းချုပ်ဖို့. သိပ္ပံ 354, 1273-1277 (2016) .doi: 10.1126 / science.aah5234 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
45 ။ Ikemoto S က Dopamine ဆုလာဘ် circuitry: အ ventral midbrain ကနေနှစ်ခု projection စနစ်များနျူကလိယမှ accumbens-olfactory tubercle ရှုပ်ထွေးသော. ဦးနှောက် Res ဗြာ 56, 27–78 (2007).doi:10.1016/j.brainresrev.2007.05.004 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
46 ။ Syed EC, Grima ll, Magill PJ, Bogacz R ကို, ဘရောင်း P နှင့်ဝေါ်လ်တန် ME လှုပ်ရှားမှုစတင်အနာဂတ်ဆုလာဘ်၏ mesolimbic dopamine encoding ကပုံစံသွင်းသွင်း. နတ် neuroscience (2015) .doi: 10.1038 / nn.4187 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
47 ။ Floresco SB, ယန် CR, Phillips က AG ကနှင့် Blaha CD ကို Basolateral amygdala ဆွဟာ anaesthetized ကြွက်၏နျူကလိယ accumbens အတွက်အချိုမှု receptor-မှီခို dopamine efflux evokes. EUR J ကို neuroscience 10, 1241-51 (1998) ။ [PubMed] [Google Scholar]
48 ။ ဂျုံးစ် JL, နေ့ JJ, Aragona BJ, ဝီ RA, Wightman RM နှင့် Carelli RM Basolateral amygdala နျူကလီးယပ် accumbens အတွက် terminal ကို dopamine လွှတ်ပေးရန် modulates နှင့်တုံ့ပြန်အေးစက်. Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု 67, 737–44 (2010).doi:S0006–3223(09)01327–4 [pii] 10.1016/j.biopsych.2009.11.006 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
49 ။ Cachope R ကို, Mateo Y ကို, Mathur BN, Irving J ကို, ဝမ် HL, Morales က M, မေတ္တာရှင် DM နှင့်ရူ့ JF cholinergic interneurons ၏ရွေးချယ် activation accumbal phasic dopamine လွှတ်ပေးရန်ပိုကောင်းစေပါတယ်: ဆုလာဘ်အပြောင်းအလဲနဲ့များအတွက်သေံ setting. cell ကိုယ်စားလှယ် 2, 33–41 (2012).doi:10.1016/j.celrep.2012.05.011 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
50 ။ Threlfell S က, Lalic T က, Platt NJ, Jennings Ka, Deisseroth K နှင့် Cragg SJ Striatal dopamine လွှတ်ပေးရန် cholinergic interneurons အတွက်ညှိလှုပ်ရှားမှုအားဖြင့်အစပျိုးနေသည်. အာရုံခံဆဲလျ 75, 58-64 (2012) .doi: 10.1016 / j.neuron.2012.04.038 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
51 ။ ကျေးဇူးတော်ရှိစေသတည်း AA ကို schizophrenia များ၏ etiology များအတွက်အယူအဆ: လုပ်သူများ dopamine လွှတ်ပေးရန်နှင့် dopamine system ကိုတုန့်ပြန်၏မော်ဂျူနှိုင်းယှဉ် Phasic. neuroscience 41, 1-24 (1991) ။ [PubMed] [Google Scholar]
52 ။ Moyer JT, Wolf ကဂျေအေနှင့် Finkel LH အဆိုပါ ventral striatal အလတ်စား spiny အာရုံခံဆဲလျ၏သမာဓိဂုဏ်သတ္တိအပေါ် dopaminergic မော်ဂျူ၏ဆိုးကျိုးများ. J ကို Neurophysiol 98, 3731-48 (2007) ။ [PubMed] [Google Scholar]
53 ။ Jędrzejewska-Szmek J ကို, Damodaran S က, Dorman DB နှင့်ဘလက်ဝဲလ် KT ကယ်လ်ဆီယမ်ဒိုင်းနမစ် striatal spiny projection အာရုံခံအတွက် Synaptic plasticity ၏ဦးတည်ချက်ခန့်မှန်း. EUR J ကို neuroscience 45, 1044–1056 (2017).doi:10.1111/ejn.13287 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
54 ။ မောရစ်, G, Arkadir: D, Nevet တစ်ဦးက, Vaadia E နှင့် Bergman H ကို midbrain dopamine နဲ့ striatal ၏တိုက်ဆိုင်မှုပေမယ့်ကွဲပြားမက်ဆေ့ခ်ျလုပ်သူများတက်ကြွအာရုံခံ. အာရုံခံဆဲလျ 43, 133-43 (2004) ။ [PubMed] [Google Scholar]
55 ။ ဘရောင်း MT, Tan က KR, O'Connor EC, Nikonenko ငါ Muller: D နှင့်Lüscherကို C Ventral tegmental ဧရိယာဂါဘမြို့သားစီမံချက်များဝန်ထမ်းတွေရဲ့သင်ယူမှုမြှင့်တင်ရန် accumbal cholinergic interneurons ခေတ္တရပ်တန့်ပြီး. သဘာဝ (2012) .doi: 10.1038 / nature11657 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
56 ။ Yamanaka K ကိုဟောရိ Y ကို, Minamimoto T က, Yamada H ကို, Matsumoto N ကို, Enomoto K ကို Aosaki T က, Graybiel လေးနှင့် Kimura M က သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဖြစ်ရပ်များအသင်းသင်ယူမှုအတွက် dorsal striatum အတွက် thalamus နှင့် cholinergic interneurons ၏ centromedian parafascicular အရေးပါ၏အခန်းကဏ္ဍ. J ကိုဦးနှောက်ကဲ့သို့ရှုပ်ထွေးသော Transm (ဗီယင်နာ) (2017).doi:10.1007/s00702-017-1713-z [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
57 ။ Shen W က, Plotkin JL, Francardo V ကို, Ko wk, Xie Z ကိုလီမေး, Fieblinger T က, Wess J ကို, Neubig RR, Lindsley CW, Conn PJ, Greengard P ကို, Bezard အီး, Cenci MA နဲ့ Surmeier DJ သမား L-DOPA-သွေးဆောင် Dyskinesia ၏ & Models အတွက် M4 Muscarinic receptor signal Ameliorates Striatal ပလပ်စတစ်လိုငွေပြမှု. အာရုံခံဆဲလျ 88, 762–73 (2015).doi:10.1016/j.neuron.2015.10.039 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
58 ။ Nair AG က, Gutierrez-Arena အို Eriksson အိုဗင်းဆင့် P နှင့် Hellgren Kotaleski J ကို တိုက်ရိုက်နဲ့သွယ်ဝိုက် Pathway Striatal အလတ်စား Spiny အာရုံခံအတွက် Adenylyl Cyclase-coupled GPCRs မှတဆင့်အပျက်သဘောဆောင်သောဆုကြေးနေရင်မြန်အောင်နှိုင်းယှဉ်အပြုသဘောဆောင်သော sensing. J ကို neuroscience 35, 14017–30 (2015).doi:10.1523/JNEUROSCI.0730-15.2015 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
59 ။ Stocco တစ်ဦးက တုန့်ပြန်ရွေးချယ်ရေးအတွက် Acetylcholine-based entropy: interneurons ဆုံးဖြတ်ချက်ချအတွက်ရှာဖွေရေး, ခေါင်းပုံဖြတ်ခြင်း, တုံ့ပြန်မှုအမျိုးမျိုးပြောင်းလဲ modulate ဘယ်လို striatal တစ်မော်ဒယ်. neuroscience အတွက်နယ်စပ်ဒေသ 6, (2012) ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [Google Scholar]
60 ။ Franklin NT နှင့်ဖရန့် MJ striatal လူဦးရေမရေရာထိန်းညှိခြင်းနှင့်အားဖြည့်သင်ယူမှုပိုကောင်းအောင်တစ်ဦးက cholinergic တုံ့ပြန်ချက် circuit ကို. eLife 4, (2015) .doi: 10.7554 / eLife.12029 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
61 ။ Nougaret S နှင့် Ravel S က အမျိုးမျိုးအင်အားစုသယ်ဆောင်ပွဲများအားဖြင့်မျောက် Striatum ၏လုပ်သူများ Active ကိုအာရုံခံ၏ Modulation နှင့်သတင်းအချက်အလက်ဆုလာဘ်. J ကို neuroscience 35, 15214-26 (2015) .doi: 10.1523 / JNEUROSCI.0039-15.2015 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
62 ။ Schultz W က dopamine အာရုံခံ၏ကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်ဆုလာဘ် signal ကို. J ကို Neurophysiol 80, 1-27 (1998) ။ [PubMed] [Google Scholar]
63 ။ Lammel S က, Hetzel တစ်ဦးက, Häckelအိုဂျုံးစ်ငါ Liss B နဲ့ Roeper J ကို တစ်ဦးကို dual mesocorticolimbic dopamine သည့်စနစ်အတွင်း mesoprefrontal အာရုံခံ၏ထူးခြားတဲ့ဂုဏ်သတ္တိ. အာရုံခံဆဲလျ 57, 760-73 (2008) .doi: 10.1016 / j.neuron.2008.01.022 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
64 ။ Poulin JF, Zou J ကို, Drouin-Ouellet J ကိုကင်မ် KY, Cicchetti F နှင့် Awatramani RB Single-ဆဲလ်ဗီဇစကားရပ်ကိုအားဖြင့် midbrain dopaminergic အာရုံခံဆဲလျမတူကွဲပြားမှု defining. cell ကိုယ်စားလှယ် 9, 930–43 (2014).doi:10.1016/j.celrep.2014.10.008 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
65 ။ Morales M နှင့် Margolis eb Ventral tegmental ဧရိယာ: ဆယ်လူလာပင်သောင်းပြောင်းထွေလာရောနှော, ဆက်သွယ်မှုနှင့်အပြုအမူ. နတ်ဗြာ neuroscience 18, 73-85 (2017) .doi: 10.1038 / nrn.2016.165 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
66 ။ Matsumoto M နှင့် Hikosaka အို dopamine အာရုံခံဆဲလျနှစ်မျိုးအဖြစ်ထင်ရှားစွာအပြုသဘောနှင့်အပျက်သဘောစိတ်ခွန်အားနိုးအချက်ပြမှုများကိုသိရှိစေရန်. သဘာဝ 459, 837-41 (2009) .doi: nature08028 [pii] 10.1038 / nature08028 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
67 ။ Pasquereau B နဲ့ Turner သည် RS Dopamine အာရုံခံလှုပ်ရှားမှုခလုတ်ဖြစ်ပျက်မှုခန့်မှန်းအတွက်အမှားအယွင်းများဝှက်. Neurophysiology ၏ဂျာနယ် 113, 1110–1123 (2014).doi:10.1152/jn.00401.2014 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
68 ။ Redgrave P ကို, Prescott တီဂျေနှင့် Gurney K သည် ရေတို-အောင်းနေချိန် dopamine တုံ့ပြန်မှုဆုလာဘ်အမှားအချက်ပြဟာသိပ်တိုတောင်းပါတယ်? ခေတ်ရေစီးကြောင်း neuroscience 22, 146-51 (1999) ။ [PubMed] [Google Scholar]
69 ။ Bromberg-မာတင် ES, Matsumoto M နှင့် Hikosaka အို စိတ်ခွန်အားနိုးထိန်းချုပ် Dopamine: ဆုချီးဆန္ဒရှိနှင့်သတိပေးနခွေငျး. အာရုံခံဆဲလျ 68, 815–34 (2010).doi:10.1016/j.neuron.2010.11.022 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
70 ။ Dodson PD, Dreyer JK, Jennings Ka, Syed EC, Wade-Martin R ကို, Cragg SJ, Bolam JP နှင့် Magill PJ dopaminergic အာရုံခံအားဖြင့်အလိုအလျောက်လှုပ်ရှားမှု၏ကိုယ်စားပြုမှုဆဲလ်-type အမျိုးအစားရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ပါကင်အတွက်နှောင့်အယှက်ဖြစ်ပါတယ်. proc Natl Acad သိပ္ပံယူအက်စ်အေ 113, E2180–8 (2016).doi:10.1073/pnas.1515941113 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
71 ။ Lerner TN, Shilyansky ကို C, Davidson တီဂျေ, အီဗန် Ke, Beier KT, Zalocusky Ka, Crow အဘိဓါန် AK, Malenka RC, Luo အဘိဓါန် L ကို, Tomer R ကိုနှင့် Deisseroth K သည် နဂိုအတိုင်း-ဦးနှောက် SNc Dopamine Subcircuits ကသယ်ဆောင်ထူးခြားသောအချက်အလက်တွေကိုထုတ်ဖေါ်လေ့လာဆန်းစစ်. ကလာပ်စည်း 162, 635–47 (2015).doi:10.1016/j.cell.2015.07.014 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
72 ။ က Parker အဲန်အက်ဖ်, ကင်မရွန် CM, Taliaferro JP, Lee က J ကို, Choi JY, Davidson တီဂျေဒေါ် ND နှင့် Witten ခလရ midbrain dopamine အာရုံခံ၏ဆိပ်ကမ်းအတွက်ဆုလာဘ်များနှင့်ရှေးခယျြမှု encoding က striatal ပစ်မှတ်ပေါ်မှာမူတည်ပါတယ်. နတ် neuroscience (2016) .doi: 10.1038 / nn.4287 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
73 ။ Kim က CK, ယန် SJ, Pichamoorthy N ကို, Young က NP, Kauvar ငါ Jennings JH, Lerner TN, Berndt တစ်ဦးက, Lee က SY, Ramakrishnan က C, Davidson တီဂျေ, Inoue M က, Bito H ကိုနှင့် Deisseroth K သည် အဆိုပါနို့တိုက်သတ္တဝါငယ်တွေဟာဦးနှောက်ကိုဖြတ်ပြီးမျိုးစုံက်ဘ်ဆိုက်များမှာ circuit ကိုဒိုင်းနမစ်၏တစ်ပြိုင်နက်အစာရှောင်ခြင်းတိုင်းတာခြင်း. သဘာဝတရားနည်းလမ်းများ 13, 325–328 (2016).doi:10.1038/nmeth.3770 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
74 ။ Menegas W က, Babayan BM, Uchida N နှင့် Watabe-Uchida M က ကြွက်တွေမှာ ventral နှင့် posterior striatum အတွက် dopamine အချက်ပြအတွက်ဝတ္ထုတွေကိုမှဆန့်ကျင်ဘက်စတင်ခြင်း. Elife 6, (2017) .doi: 10.7554 / eLife.21886 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
75 ။ ဘရောင်း, HD, McCutcheon je, Cone JJ, Ragozzino ME နှင့် Roitman MF မူလတန်းအစားအစာဆုလာဘ်များနှင့်ဆုလာဘ်-ကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်လှုံ့ဆော်မှုအဆိုပါ striatum တစ်လျှောက်လုံး phasic dopamine အချက်ပြ၏ကွဲပြားခြားနားသောပုံစံများကျလာသော. neuroscience ၏ဥရောပဂျာနယ် 34, 1997–2006 (2011).doi:10.1111/j.1460-9568.2011.07914.x [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
76 ။ Knutson B နဲ့ Greer သည် SM Anticipatory ထိခိုက်စေ: ရွေးချယ်မှုများအတွက်အာရုံကြောဆက်စပ်နှင့်အကျိုးဆက်များ. ဖီလိုဖြတ်ကျော် R ကို Soc Lond B ကို Biol သိပ္ပံ 363, 3771–86 (2008).doi:10.1098/rstb.2008.0155 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
77 ။ Bartra အို McGuire JT နှင့် Kable JW အဆိုပါအဘိုးပြတ်စနစ်က: ပုဂ္ဂလဒိဋ္တန်ဖိုးအာရုံကြောဆက်စပ်ဆန်းစစ် BOLD fMRI စမ်းသပ်ချက်တစ်ခုကိုသြဒိနိတ်-based Meta-analysis သည်. Neuroimage 76, 412–27 (2013).doi:10.1016/j.neuroimage.2013.02.063 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
78 ။ Ferenczi EA ၏, Zalocusky Ka, Liston ကို C, Grosenick L ကို, မှူး MR, Amatya: D, Katovich K ကိုထာ H ကို, Patenaude B, Ramakrishnan က C, Kalanithi P ကို, Etkin တစ်ဦးက, Knutson B, ဂလိုဗာ GH နှင့် Deisseroth K သည် brainwide circuit ကိုဒိုင်းနမစ်၏ Prefrontal cortical စည်းမျဉ်းများနှင့်အကြိုးကို-related အပြုအမူ. သိပ္ပံ 351, aac9698 (2016) .doi: 10.1126 / science.aac9698 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
79 ။ Bertran-Gonzalez J ကို, Bosch ကနေ C, Maroteaux M က, Matamales M က, Hervé: D, Valjent E နှင့် Girault ဂျေအေ ကိုကင်းနှင့်အ haloperidol တုံ့ပြန် dopamine D1 နှင့် D2 အဲဒီ receptor-ဖော်ပြ striatal အာရုံခံအတွက် activation အချက်ပြ၏ဆန့်ကျင်ပုံစံများ. J ကို neuroscience 28, 5671-85 (2008) .doi: 10.1523 / JNEUROSCI.1039-08.2008 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
80 ။ Redgrave P ကို, Prescott တီဂျေနှင့် Gurney K သည် အဆိုပါ Basal ganglia: အရွေးချယ်ရေးပြဿနာတစ်ခုကျောရိုးရှိသတ္တဝါဖြေရှင်းချက်? neuroscience 89, 1009-23 (1999) ။ [PubMed] [Google Scholar]
81 ။ Beeler ဂျာဖရေဇီယာ CR နှင့် Zhuang မှာ X ဘတ်ဂျက်အပေါ်အလိုဆန္ဒချပြီး: dopamine နှင့်စွမ်းအင်အသုံးစရိတ်, ပွနျလညျသငျ့ဆုလာဘ်နှင့်အရင်းအမြစ်များ. တပ်ဦး Integrated neuroscience 6, 49 (2012) .doi: 10.3389 / fnint.2012.00049 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
82 ။ Anderson က BA, Kuwabara H ကို, Wong က DF, Gean ဥပမာ Rahmim တစ်ဦးက, Brašić JR, ဂျော့ခ်ျ N ကို, Frolov B, Courtney သည် SM နှင့် Yantis S က Value ကို-အခြေပြုအာရုံကို Orient အတွက် Dopamine ၏အခန်းက္ပ. Curr Biol 26, 550–5 (2016).doi:10.1016/j.cub.2015.12.062 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
83 ။ Chatham CH, ဖရန့် MJ နှင့် Badre: D အလုပ်လုပ်မှတ်ဉာဏ်ထဲကနေရွေးချယ်ရေးစဉ်အတွင်း Corticostriatal output ကို Gates. အာရုံခံဆဲလျ 81, 930–42 (2014).doi:10.1016/j.neuron.2014.01.002 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
84 ။ Shenhav တစ်ဦးက, Botvinick MM နှင့် Cohen ကို JD ထိန်းချုပ်မှုများ၏မျှော်လင့်ထားသည့်တန်ဖိုးကို: anterior cingulate cortex function ကိုတစ်ဦး Integrated သီအိုရီ. အာရုံခံဆဲလျ 79, 217–40 (2013).doi:10.1016/j.neuron.2013.07.007 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
85 ။ Aarts အီး, Roelofs တစ်ဦးက, Frank B, Rijpkema M က, ဖာနန်ဒက်, G, Helmich RC နှင့် Cool R ကို Striatal dopamine လူသားတွေအတွက်စိတ်ခွန်အားနိုးနှင့်သိမြင်မှုထိန်းချုပ်ရေးအကြား Interface ကို mediates: မျိုးရိုးဗီဇပုံရိပ်ကနေသက်သေအထောက်အထား. Neuropsychopharmacology 35, 1943–51 (2010).doi:10.1038/npp.2010.68 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
86 ။ Westbrook A နှင့် Braver TS Dopamine လှုံ့ဆျောမှုသိမှုကြိုးပမ်းမှုအတွက်နှစ်ချက် Duty လော. အာရုံခံဆဲလျ 89, 695–710 (2016).doi:10.1016/j.neuron.2015.12.029 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
87 ။ Manohar စင်ကာပူဒေါ်လာ, Chong TT, Apps ကပ, MA, Batla တစ်ဦးက, Stamelou M က, Jarman PR စနစ်, Bhatia KP နှင့် Husain M က ဆုလာဘ်မော်တော်နဲ့သိမှုထိန်းချုပ်ရေးအတွက်ဆူညံသံလျှော့ချရေး၏ကုန်ကျစရိတ်ချေ. Curr Biol 25, 1707–16 (2015).doi:10.1016/j.cub.2015.05.038 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
88 ။ Wunderlich K ကို Smittenaar P နှင့် Dolan RJ Dopamine မော်ဒယ်-အခမဲ့ရွေးချယ်မှုအပြုအမူကျော်မော်ဒယ်-အခြေခံပြီးပိုကောင်းစေပါတယ်. အာရုံခံဆဲလျ 75, 418–24 (2012).doi:10.1016/j.neuron.2012.03.042 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
89 ။ Nicola သည် SM အဆိုပါပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ချဉ်းကပ်မှုယူဆချက်: နျူကလိယ၏အခန်းကဏ္ဍကိုအဘို့ကြိုးစားအားထုတ်ခြင်းနှင့် cue-တုံ့ပြန်ယူဆချက်ပေါင်းစည်းရေးဆုလာဘ်-ရှာကြံအပြုအမူများ၏ activation အတွက် dopamine accumbens. J ကို neuroscience 30, 16585–600 (2010).doi:10.1523/JNEUROSCI.3958-10.2010 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
90 ။ Eban-Rothschild တစ်ဦးက, Rothschild, G, Giardino WJ, ဂျုံးစ် JR နှင့်က de Lecea L ကို VTA dopaminergic အာရုံခံ ethologically သက်ဆိုင်ရာအိပ်ပျော်ခြင်း-ပါတီအားအပြုအမူတွေကိုထိန်းညှိ. နတ် neuroscience (2016) .doi: 10.1038 / nn.4377 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
91 ။ Haber SN, Fudge JL နှင့် McFarland ရော်ဘာ မျောက်ဝံများအတွက် Striatonigrostriatal လမ်းကြောင်းဟာ dorsolateral striatum ဖို့ shell ကိုတစ်ဦးထံမှတက်လျက်ရှိနေသည်ကိုလိမ်ဖွဲ့စည်း. J ကို neuroscience 20, 2369-82 (2000) ။ [PubMed] [Google Scholar]
92 ။ Reddi BAJ နှင့်လက်သမား RHS ဆုံးဖြတ်ချက်အချိန်ပေါ်အရေးတကြီး၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှု. သဘာဝတရားမှ neuroscience 3, 827 (2000) ။ [PubMed] [Google Scholar]
93 ။ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌသူရ: D နှင့် Cisek P ကို အဆိုပါ Basal Ganglia ရောကျပစ်မှတ်ကိုရွေးချယ်ပါဒါပေမယ့်ကတိများအရေးတကြီးသဘောထားနဲ့ထိန်းချုပ်မ. အာရုံခံဆဲလျ (2017) .doi: 10.1016 / j.neuron.2017.07.039 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
94 ။ Turner သည် RS နှင့် Desmurget M က မော်တာထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့ Basal ganglia ပံ့ပိုးမှုများကို: တစ်သန်စွမ်းနည်းပြဆရာ. Curr Opin Neurobiol 20, 704–16 (2010).doi:10.1016/j.conb.2010.08.022 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
95 ။ Hikosaka အို Nakamura K နှင့် Nakahara H ကို ဆုချမှ Basal ganglia orient မျက်စိ. J ကို Neurophysiol 95, 567-84 (2006) .doi: 10.1152 / jn.00458.2005 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
96 ။ ကယ်လီ PH သည်နှင့် Moore က Ke nigrostriatal function ကို၏အလှည့်မော်ဒယ်အတွက် Mesolimbic dopaminergic အာရုံခံ. သဘာဝ 263, 695-6 (1976) ။ [PubMed] [Google Scholar]
97 ။ ဝမ်းကွဲက MS, Atherton တစ်ဦးက, Turner က L နဲ့ Salamone JD နျူကလိယ dopamine ကွယ်ပျောက်သွားစေမယ့် T-ဝင်္ကုန်ကျစရိတ် / အကျိုးအတွက်လုပ်ငန်းတာဝန်များတွင်ဆွေမျိုးတုံ့ပြန်မှုခွဲဝေပြောင်းလဲ accumbens. ပြုမူနေဦးနှောက် Res 74, 189-97 ။ (1996) ။ [PubMed] [Google Scholar]
98 ။ Redish အေဒီ Vicary ရုံးတင်စစ်ဆေးခြင်းနှင့်အမှား. နတ်ဗြာ neuroscience 17, 147–59 (2016).doi:10.1038/nrn.2015.30 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
99 ။ Rabinovich MI, Huerta R ကို, Varona P နှင့် Afraimovich VS ယာယီသိမြင်ဒိုင်းနမစ်, metastability နှင့်ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ခြင်း. PLoS computing Biol 4, e1000072 (2008) .doi: 10.1371 / journal.pcbi.1000072 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
100 ။ ကုန်သည် H ကို, Harrington DL နှင့် Meck WH အချိန်အမြင်နှင့်ခန့်မှန်းချက်များအာရုံကြောအခြေခံ. Annu ဗြာ neuroscience 36, 313-36 (2013) .doi: 10.1146 / annurev-neuro-062012-170349 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]